That's so good, right?: July 2016
Spying on My Dad Jacking Off
အလယ်တန်းကျောင်းရဲ့ နောက်ဆုံး ၈တန်းတက်တဲ့နှစ်မှာ လူတိုင်းလိုလို လိင်အာသာဖြေ(-ွင်းထု)တဲ့ကိစ္စပြောနေကြတဲ့အကြောင်း သတိရမိပါတယ်။ ၈တန်းကျောင်းသားတွေထဲကမှ အသက်နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေက အဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့အခါ ‘အဖြူရောင် အရည်တွေထွက်ချိန်ဆို ဖီလင်ဘယ်လိုကောင်းတယ်’ ဆိုတာပြောတတ်ကြတယ်ဗျ။ သူတို့လိင်အာသာဖြေတဲ့အကြောင်းပြောချိန်ဆို ကျနော့်စိတ်ထဲဘယ်လိုခံစားရမှန်းမသိဘူး တစ်မျိုးကြီးအမြဲဖြစ်နေရော။ သူတို့ပြောတဲ့နည်းတွေ ဟန်တွေအတိုင်းကျနော် ကိုယ့်ဖာသာ လုပ်ကြည့်ပြန်တော့လည်း သူတို့ပြောတဲ့အထိအတွေ့ခံစားမှုမျိုးရဖို့ ကံမကောင်းခဲ့ဘူးထင်တယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဇော်ကြီးက “ယောက်ျားလေးတိုင်းလုပ်တယ်ကွ…ငါတို့အဖေတွေတောင်လုပ်တာ သေချာသလောက်ပဲ”လို့ ပြောပါတယ်။ အခြားဟိုပြောဒီပြောချိန် တုန်းကစိတ်ထဲဘယ်လိုမှမနေပေမဲ့ အဖေတို့ကောလုပ်တတ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ ရွံရှာမိသလိုခံစားရပါတယ်။ ဇော်ကြီး ထပ်ပြောသေးတာက “အဖြူရောင်အရည်တွေဟာ သုက်ရည်”ဖြစ်ပါသတဲ့။ သုက်ရည်ထွက်နိုင်တဲ့လူများဟာ တစ်နည်းဆိုရရင် အရွယ်ရောက် ပြီး လူပျိုဖော်ဝင်ပြီးသူများလို့ဆိုင်နိုင်ပါတယ်တဲ့လေ။ လိင်အာသာဖြေတာကို သိနေပေမယ့်သုက်ရည်ပန်းထုတ်လို့ရကြောင်း ကျနော်သတိ မထားမိပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လိင်အာသာဖြေတော့လည်း လိင်တံအရေပြားခြောက်သွေ့လို့နာတာပဲသိတယ်။ ၈တန်းဆိုပေမဲ့ အသက် နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ ကောင်လေးတွေပါတတ်တော့ ဆရာဆရာမအတန်းထဲမ၀င်ချိန် ကောင်မလေးတွေ သတိမထားမိချိန်ဆိုရင် အတန်း နောက်ဘက်က ခုံတွေမှာ သူတို့ငပဲတွေကိုဆွဲထုတ်ပြပြီး လိင်တံကြီးထွားလာကြတာကိုပြိုင်ရတာအမော။ သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက်ပြောတာ သူ့ငပဲက မာတောင့်ချိန်ဆို ၇လက်မရှိသတဲ့။ အဲ့ဒါကြားတော့ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းလိုကိုဖြစ်နေတာပါ။ ကျနော့်ငပဲကို ကိုယ့်ဖာသာတိုင်းကြည့်တော့ မာတောင့်ချိန်မှာတောင် လေးလက်မလောက်ပဲရှိတာမှတ်မိနေသေးတယ်။ ကျနော်တော်တော် တော့ ရှက်စိတ်ဝင်မိတယ်ဗျ။ တစ်ကျောင်းလုံးမှာ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ လိင်အာသာဖြေတဲ့အကြောင်းလဲ ကောင်းကောင်းမသိ လူပျိုဖော် မ၀င်သေးတဲ့သူလည်းဖြစ်နေမလားလို့။
ဒီအချိန်မှာပဲ အဖေက ကျနော့်ဘ၀ထဲလှမ်းဝင်လာတာပါ။ ကြီးပြင်းလာချိန်တလျှောက်လုံး အဖေနဲ့ပဲ ကျနော်နေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဖေနဲ့အမေဟာ ကျနော့်အသက် ၅နှစ်အရွယ်မှာပဲ လင်မယားကွာရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။ အမေက မြို့တော်ကြီးကိုဖယ်ခွာပြီး သူ့ဇာတိရှိရာ နယ်မြို့လေးကိုပြန်သွားပါတယ် ကျနော့်ညီမလေးကို တပါတည်းခေါ်သွားရင်းပေါ့နော်။ ကျနော်တို့အိမ်မှာ အဖေနဲ့ကျနော် အကူမခေါ်ဘဲ အတူနေလာခဲ့ကြတာ ၇နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီလေ။ ကျနော့်အသက် ၁၂နှစ်ရှိချိန်မှာ အဖေ့အသက်က ၃၇နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အရပ်အမြင့်က ၅ပေ၁၁လက်မလောက်ရှိတာကြောင့် အရပ်အနည်းငယ်မြင့်တဲ့အထဲတော့ပါပါတယ်။ ဗိုက်ကလေးအနည်းငယ်ဆူတာကလွဲလို့ သူ့ကိုယ်လုံး အနေအထားက ကြည့်ကောင်းတဲ့အထဲပါတာပေါ့။ သူ့ရင်အုပ်တွေက ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ ကြွက်သားအမြှောင်းကြီးဟာ သူ့ဗိုက်သားအထိ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရအောင် ကိုယ်ဟန်လှပါတယ်။ ကျနော်အသက်ရလာတဲ့အခါ အဖေ့ကိုယ်ဟန်အနေအထားအတိုင်းဖြစ်ချင်စိတ် ရှိခဲ့တာ ကို သတိထားမိခဲ့ပါရဲ့။ ပြောစရာတစ်ခုရှိတာက အဖေ့အနေနဲ့လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရိပ်အမြွက်လေးတောင် ကျနော်နဲ့စကားစမြည်ပြော ကျင့်မရှိပါဘူး။ တစ်ခါတလေ ကျနော့်လိင်တံအရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖေပြောဆိုစနောက်တဲ့အချိန်ဆို အရမ်းရှက်နေတတ်တာပဲ သိတယ် လူပျိုဖော်လည်းမ၀င်သေးဘူးဆိုတော့ကျနော်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ အခြားအကြောင်းအရာကိုပြောင်းပြောအောင် အမြဲကြိုးစား ဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်တာပဲ။ အဖေ့မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိပါတယ်။ အမြဲလိုလို သူ့လုပ်ငန်းအတွက်ပဲ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြိုးစားနေတာနဲ့ပဲ ကျေနပ် နေတယ်လေ။ ကျနော်ကျောင်းတက်နေတုန်းသတိထားမိရတာက သူဟာ တနင်္လာကနေ ကြာသပတေးနေ့ထိအလုပ်လုပ်ပြီး သောကြာနေ့ နားကာ စနေနေ့အလုပ်ပြန်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ အဖေ့ကို သူဘာကြောင့်ဒီလိုနားရက်ယူသလဲမေးခွန်းမထုတ်ဖူးပါဘူး။ နည်းနည်း ထူးဆန်းတယ်လို့တော့ ထင်တာပေါ့လေ။ မကြာခင်သောအချိန်မှာတော့ ဘာကြောင့်ဆိုတာ မဆိုစလောက်ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။
‘ယောက်ျားတွေအကုန်လုံး လိင်အာသာဖြေ(-ွင်းထု)ကြတာပဲလေ…ငါတို့အဖေတွေလည်းအပါအ၀င်ပေါ့” ဆိုတဲ့ ဇော်ကြီးပြောစကားကို ကြားပြီးနောက်မှာ ခေါင်းထဲအမြဲလိုလိုအတွေးဝင်မိရတာပေါ့။ ကျနော့်အဖေရဲ့အကြောင်းနဲ့ သူ့လိင်အင်္ဂါအကြောင်း စိတ်ဝင်စားစပြု လာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်အတွေးထဲမှာ အဖေဘယ်လိုများ လိင်အာသာဖြေပါလိမ့်လို့ သိချင်နေမိတယ်။ အဖေ တကိုယ်လုံးအ၀တ်မပါဘဲဆိုရင် ဘယ်လို ပုံစံများရှိမလဲ ကျနော်သိချင်တာလည်းပါတယ်လေ။ အဖေနဲ့အတူနေပြီး ကြီးပြင်းလာတဲ့သက်တမ်းတလျှောက်မှာ အ၀တ်မပါ တာဆိုလို့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးဝတ်ပြီးနေတာပဲမြင်ဖူးတယ်ဗျ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အမြဲလိုလိုအဖေ့ရဲ့ ဘောင်းဘီပေါင်ခွဆုံနေရာက အထုပ်အထည်ကို အာရုံစိုက်သလို သတိထားမိနေတာက စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကို စူးစူးစိုက်စိုက် အာရုံကိုက်လေ့လာ နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ မနက်တိုင်း အဖေက ကျနော့်ကို ကျောင်းမှာချထားခဲ့ပြီး အလုပ်ကိုကားလေးမောင်းထွက်သွားတတ်တယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သောကြာနေ့(သူ့အလုပ်ပိတ်ရက်)မှာ ကျနော့်ကိုကျောင်းမှာချထားပေးခဲ့ပြီးရင်း အားကစားခန်းမ(Gym)ကိုဦးတည်သွားတတ်ပြီး အိမ်ကိုတန်းပြန်သွားတတ်တာ သဘာဝလိုကိုဖြစ်နေပြီ။ လာမယ့်သောကြာနေ့မနက်မှာ ကျောင်းဝန်ထမ်းတွေအတွက်အစည်းအဝေးရှိတာ ကြောင့် ကျနော် ခပ်စောစောသွားစရာမလိုဘူးဆိုတော့ ကျနော့်ဖေဖေကြီး ဘယ်လိုလက်သမားလုပ်မယ်ဆိုတာချောင်းကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်း ပေါ်လာတာပေါ့နော်။ သောကြာနေ့မနက်စောစောကျောင်းကိုမသွားရဘူးဆိုတာ အဖေ့ကိုမပြောဖို့ကျနော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
သောကြာနေ့ မနက် ၁၁နာရီလောက်မှာ ကျောင်းကတိတ်တဆိတ်ထွက်လာပြီး ကားကြုံလိုက်ရင်း ဇော်ကြီးရဲ့မာမီကို အိမ်ရှေ့မှာချခဲ့ပေးဖို့ ပြောလိုက်တယ် အဖေက အလုပ်သွားနေလို့လို့ ညာပြောရင်းပေါ့။ လမ်းကြောင်းအတိုင်း အသာအယာမောင်းလာပြီးနောက် အိမ်ရှေ့မှာ တိတ်တဆိတ် ချပေးခဲ့တာကြောင့် ကျနော့်အတွက် ပိုအဆင်ပြေသွားတယ်။ အဖေ gym ကနေ အိမ်ကိုပြန်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့ တစ်ခုခု အစီအစဉ်ဆွဲမှပါပဲ။ ကျနော်အိမ်ထဲကိုခပ်သွက်သွက်ဝင်လိုက်ကာ သူ့အိပ်ခန်းထဲကိုအလျင်အမြန်ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ပုန်းလို့အဆင်ပြေမလဲ တစ်ယောက်တည်းငြင်းခုန်နေရင်းမှ သူ့ခုတင်ညာဘက်ဘေးက အ၀တ်ဘီရိုထဲဝင်နေဖို့ ကျနော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်သိတယ်လေ ပြန်ရောက်လို့ ရေချိုးပြီးရင် သက်သောင့်သက်သာအ၀တ်အစားလေးတွေပဲဝတ်တတ်တော့ ခုတင်ဘေးအံဆွဲထဲက အ၀တ်တွေပဲဝတ်မှာမို့ အ၀တ်ဘီရိုကိုဖွင့်စရာမလိုလောက်ဘူး အာ…အဲ့သလိုဖြစ်ဖို့ ကျနော်မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အ၀တ်ဘီရိုက သစ်သားနဲ့ လုပ်ထားပြီးတော့ ချောင်းကြည့်လို့ရတဲ့ ကြားအဟလေးတွေကြောင့် အဆင်ပြေပြေချောင်းလို့ရမှာပါ။ ရေချိုးခန်းထဲကိုပဲတန်းဝင်ဝင် ခုတင် ပေါ်ကိုပဲတက်တက် အခန်းတစ်ခုလုံးကိုမြင်နေနိုင်တာဆိုတော့ နေရာယူဖို့ကောင်းတဲ့ အ၀တ်ဘီရိုပါပဲ။ အ၀တ်ဘီရိုထဲ ၀င်ရမလား မ၀င်ရဘူး လား ၀င်ရင်ကောင်းမလား မကောင်းဘူးလား ၁၀မိနစ်လောက်တွေဝေနေမိပါတယ်။ ကျနော့်ကို ဖမ်းမိသွားနိုင်တာကြောင့် ကြောက်တာတော့ ကြောက်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့နောက်ကျနေပြီ အိမ်ရှေ့တံခါးကနေ သူအိမ်ထဲဝင်လာသံကြားနေရပါပြီ။
ကျနော့်မှာ ကြောက်လန့်စိတ်ကြောင့် အသက်ခပ်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်မိကာ အ၀တ်ဘီရိုထဲဝယ် မလှုပ်မပြုငြိမ်နေခဲ့မိပါတယ်။ အဖေက သူ့ Gym အ၀တ်အိတ်ကိုလက်နဲ့ဆွဲကိုင်ရင်း အခန်းထဲကိုလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ‘Shit’ ပြဿနာပဲ…ကျနော် Gym bag ကိုမေ့နေခဲ့တာ။ အဲ့အိတ်ကို အဖေက အမြဲလိုလို အ၀တ်ဘီရိုထဲတန်းထည့်တတ်တာလေ။ ခပ်မြန်မြန်လေး ထရပ်လိုက်ရင်း အ၀တ်ဘီရိုရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုခပ်ဝေးဝေး လေးကပ်နေလိုက်ပါတယ်။ သူအ၀တ်ဘီရိုကိုတန်းဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုမကြည့်လောက်ပါဘူး။ ဘီရိုတံခါးကနေ အသာချောင်း ကြည့်လိုက်တော့ အဖေက gym ၀တ်စုံကိုဝတ်ထားလျက်သားပဲရှိသေးတယ်။ ရူးတော့မှာပဲ အဖေက gym မှာရေမချိုးခဲ့ဘဲ ဘာကြောင့်ပြန် လာပါလိမ့်နော်။ တံခါးကြားကနေ တခါပြန်ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ အဖေရေချိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ။ ၀တ်ထားတဲ့အားကစားဘောင်းဘီတိုကိုချွတ်၊ တီရှပ်ကိုချွတ်နေတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးနဲ့ သူ့bicepsတွေကို မှန်ထဲနှစ်လိုလက်ရကြည့်နေလေရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကိုထိထိရောက် ရောက်ကစားမိခြင်းအကျိုးကျေးဇူးလို့ သူ့ဘာသာဝမ်းမြောက်နေပုံပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုပါ လျောကနဲချွတ်ချလိုက် ပါတယ်။ ကျနော်စကြည့်မိတာက ကျစ်လစ်တင်းရင်းလှသော သူ့တင်ပါးအစုံကိုပါ။ နောက်တော့ ကျနော့်ဦးတည်ရာကို အသာကြည့်လိုက် တော့ အဖေ့ရဲ့ငပဲကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျနော့်မေးရိုးတွေ အောက်ကိုပြုတ်ကျသည့်အတိုင်း ပါးစပ်ကို ခပ်ကျယ်ကျယ်မရည်ရွယ်ဘဲ ဟသွားရတာ သတိပြုမိရဲ့။ ပျော့နေဆဲ့ ကျနော့် အဖေရဲ့ငပဲဟာ ကျနော့်ငပဲမာတောင့်လာချိန်အခြေအနေထက် ပိုကြီးပါတယ်။ ကျနော့်ငပဲလိုပဲ လိင်တံထိပ်အရေပြားကိုဖြတ်ထားသလို ရွှေဥ တွေကလည်း လုံးဝိုင်းပြီးထွားနေရော။ ကျနော့်မျက်လုံးတွေက ကျနော့်ရွှေဥတွေထက်ပိုကြီးတဲ့ အဖေ့ရွှေဥတွေဆီအတန်ကြာမျက်စိမလွှဲ ကြည့်မိပါတယ်။
'အိုကေ ကောင်လေး၊ မင်းလည်း ကောင်းကောင်းမမာရတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ မာချင်နေပြီဟုတ်’ ကျနော့်အဖေ ဘာပြောလိုက်ပါလိမ့်။
ပထမတော့ ကျောရိုးထဲစိမ့်ကနဲနေအောင် ကျနော်ထိတ်လန့်သွားမိပါတယ် အဖေက ကျနော့်ကိုပြောလိုက်တယ် ထင်တာကိုး။ နောက်မှ အဖေက သူ့ဘာသာသူပြောနေတာ ဒါမှမဟုတ် သူ့ငပဲကိုရည်ညွှန်းပြောနေကြောင်း သတိထားမိတယ်။ နောက်တော့ အိပ်ရာပေါ်ကို အသာ အယာလှမ်းတက်လိုက်ရင်း သူ့ငပဲကိုသူကိုင်ကာ စပြီးလက်ကစားပါတော့တယ်။ “ဘုရား…တကယ်ကြီးဖြစ်လာပြီ” ကျနော့်အဖေဖြစ်သူ လိင်အာသာဖြေတာကို စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်။
အဖေက ခုတင်ဘေး စားပွဲခုံပေါ်က ရီမုဒ်ကို လှမ်းဆွဲယူလိုက်ရင်း နံရံပေါ်က တီဗီကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ သူ တီဗီကနေ ဘာဇာတ်လမ်းတွေ ကြည့်တယ်ဆိုတာ ဘီရိုထဲက ကျနော့်အတွက် မမြင်ရပေမဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ မသဲမကွဲညည်းညူသံ မိန်းမောသံတွေကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ အိုး…..သူ အပြာကားတွေကြည့်နေပြီလို့ ကျနော် automatic သိပြီ။ အဖေ့လက်တစ်ဖက်က အိပ်ရာခင်းအောက်က တော်တော်ကြီးတဲ့ချောဆီဘူးကို ဆွဲထုတ်ယူလိုက်တာကိုမြင်ရတယ်။ ချောဆီ(lube) အကြောင်း ကျနော် ဂဃနဏ မသိတာကြောင့် သူဘာလုပ်မလို့လဲ စူးစမ်းချင်မိရော။ သူ့အခြားလက်တစ်ဖက်ထဲကို ချောဆီအနည်းငယ်ညှစ်ထည့်လိုက်ပြီးနောက် အဲ့ဒါနဲ့ သူ့ငပဲကို စတင်ပွတ်သပ်နှိပ်ပြုပါတယ်။ ဟင်း….အဖေ သူ့ငပဲသူကိုင်ကစားနေတာကိုကြည့်ရင်း ကျနော့်ငပဲမာတောင့်လာတာကို သတိပြု မိတယ်။ ကျနော့်စိတ်တွေကို မရိုးမရွ ထကြွစေအောင်နှိုးဆွနေသလိုပါ။ ကျနော် ဘာတွေ လျှောက်တွေးနေမိပါလိမ့်။
အို….အဖေ့ငပဲကြီးတဖြေးဖြေးမတ်ပြီး ထွားလာတာများ မယုံနိုင်စရာဘဲ။ သူ့မျက်နှာကိုအသာငဲ့စောင်းကြည့်မိပြန်တော့ သည်လိုလက်ကစား ရတာကို အမှန်အကန်သဘောကျနေတဲ့ပုံ။ ချောဆီကိုသုံးပြီး သူသာယာနေပုံကြောင့် ကျနော်လည်း အဲ့သည့်ချောဆီကိုသုံးပြီး လက်ကစားချင် လိင်အာသာဖြေချင်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ် ကြီးထွားလာပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးတွေတွန့်ကွေး လက်တွေလှုပ်ရှားနေတာကိုငေးရင်းမှ အောက်ပိုင်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်တာ အဖေ့ငပဲကြီးက အိုလာလား…ဒုံးပျံကြီးကျနေတာပဲ အကြီးကြီးဗျာ။
ကျနော့်မှာ အသံမမြည်အောင် တိတ်တဆိတ် သက်ပြင်းချမိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ပါးစပ်ကိုလက်ကလေးနဲ့အသာပိတ်ထားရတယ်။ ကျနော့်အဖေ့ ငပဲက တော်တော်ကြီးတာပဲ။ သူများတွေပြောသလို ခြေချောင်းလေးတွေရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ လိင်အင်္ဂါဆိုဒ်အကြီးအသေးယှဉ်လို့ရတယ်ပြောလို့ စူးစမ်းကြည့်တော့ အဖေ့ခြေချောင်း ဖယောင်းတိုင်တွေနဲ့ ၆လက်မကျော် ၇လက်မနီးပါးရှိတဲ့သူ့ငပဲဆိုဒ် အချိုးမညီခြင်။ ငပဲရဲ့အတုတ်ကလည်း အသက်ရှူဖို့မေ့လောက်တယ် ငပဲထိပ်ခေါင်းက သံခမောက်ကြီးလိုပဲ။ မတ်ထောင်ထွားကြိုင်းနေတဲ့ငပဲကြီးကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီး အထက်အောက်လက်ကစားတာများ ကြားရတဲ့ အပြာကားထဲကအသံနဲ့စည်းချက်ညီညီ။ သူ့လက်တွေကြားက လျောကနဲ လျောကနဲပေါ် လာတဲ့ ငပဲခေါင်းကို မယုံနိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကျနော်ငေးကြည့်မိရပါတယ်။
အဖေက သူ့ငပဲကိုကိုင်ကာ လက်ကိုအထက်အောက်ကစားရင်း ဘူးထဲကချောဆီကိုပိုညှစ်ထုတ်လိမ်းလိုက်ကာ ခပ်ဖြေးဖြေးလှုပ်ရှားပါတယ် အပြာကားကိုကြည့်နေရင်းပေါ့နော်။ ကျနော်ကျောင်းမှာရှိတုန်း သောကြာနေ့တိုင်းလိုလို သူဒါကို လုပ်လေ့ရှိတာသေချာတယ်။ အ၀တ်ဘီရို ထဲဝင်ချောင်းရင်း အဖေသူ့ဟာသူလုပ်နေတာကိုစောင့်ကြည့်ရတာ စိတ်ထဲကလိကလိနဲ့ ၀မ်းသာမိသလိုပဲ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး သွေးရောင်လွှမ်းလာပြီးနောက် လက်ကလည်း သွက်သထက်သွက်လာပါတယ်။ ဇော်ကြီးပြောတာမှတ်မိတယ် သူလုပ်တဲ့အခါတိုင်း သုံးလေးမိနစ်လောက်ကြာရင် ဒီလိုဖြစ်လာတယ်တဲ့။ ကျနော့်အဖေကတော့ အဲ့သလိုမဟုတ်ပါဘူး မာတောင့်နေတဲ့ သူ့ငပဲကိုကိုင်ပြီး အလုပ်ရှုပ်နေတုန်းပါပဲ။ ဂရုမစိုက်ပါဘူးလေ အခုမြင်နေရတဲ့ဟာလေး အဆုံးသတ်မသွားသေးဖို့ပဲမျှော်လင့်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဆိုတာတွေကို အဖေ့ဆီကနေ အများကြီး ကျနော်သင်ယူလို့ရတာပေါ့။ တစ်ခုတော့သတိထားမိတယ် မပျော့တပျော့ သူ့ငပဲကို မိနစ် နှစ်ဆယ်လောက်လက်ကစားနေခဲ့သေးတာ။ အခုဘာတွေဘယ်လိုများဖြစ်လာပါလိမ့်တွေးနေမိပါတယ်။ (စိတ်ထဲဘာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိ တစ်မျိုးတမည်ဖြစ်နေရခြင်းက အခုအချိန်ထိ သုက်ရည်ကိုနည်းနည်းမှမမြင်ဖူးသေးဘူးလေ) အဖေ ညာဘက်ကို စောင်းအိပ်ပြီး လက်ကိုပေါင်ကြားလျှိုကာ ဆက်ကစားနေပါတယ်။ လက်တစ်ဖက်က သူ့ရွှေဥတွေကိုပွတ်သပ်သလို နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လဲ ကလိတာတွေ့ရတယ်။ လက်သွက်သွက်ကစားလိုက် ကြားထဲမှာ လေးငါးမိနစ်လောက်ငြိမ်ပြီး တီဗီမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်လိုက်လုပ်သေးတာ ပါ။ ဟူး…အ၀တ်ဘီရိုထဲကနေ ကျနော်ရပ်ကြည့်နေတာ အနည်းဆုံး တစ်နာရီလောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်။
နောက်ဆုံး ကျနော်သတိထားမိရတာက အဖေ့ရဲ့အမူအယာတွေ ကသုက်ကရက်နိုင်လှသလို တစ်ခုခုပြောင်းလဲဖို့ စတင်နေပြီလို့ထင်မိတယ်။ ရင်အုပ်တွေ ဗိုက်တွေကိုပွတ်သပ်နေတဲ့လက်က မြန်ဆန်လာသလို ပေါင်ကြားကလက်သမားလုပ်နေတာကလည်း ပိုပြီးကြမ်းလာပါတယ်။ အိပ်ရာတစ်ခုလုံးလည်း ဖျစ်ညှစ်တွန့်လိမ်လာတာကြောင့် ကျနော့်စိတ်ထဲနည်းနည်းကြောက်လန့်စိတ်ဖြစ်လာမိပါရဲ့။ အရင်က ဒီလို အခြေအနေ ဒီလိုအမူအယာမျိုးနဲ့အဖေ့ကိုမြင်မှမမြင်ဖူးဘဲကိုး။ သူ့ပါးစပ်ကလည်း မာန်ဖီသလိုလို ဟိန်းသံလိုလို အသံမျိုးတွေ အော်ညည်းစ ပြုလာပါပြီ။ ကျနော့်စိတ်ထဲစိုးရိမ်စိတ်တွေကဲလာသလို ရင်ခုန်သံတွေ တဒိန်းဒိန်းဖြစ်လာရကာ အခုပဲ ဘီရိုတံခါးကိုတွန်းဖွင့်ပြီးထွက်သွားလိုက် ချင်မိတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာတွေးရ ထိန်းရတာပေါ့လေ ဒါပြီးကာနီး သုက်ရည်ထွက်တော့မှာမို့ဖြစ်နေတာပါလို့လေ။
ရုတ်တရက်ဆိုသလို သူ့ခြေချောင်းအဖျားလေးတွေကွေးကောက်သွားပါတယ်။ သူ့လိင်တံထိပ်ကနေ တစ်ခုခုပစ်ထုတ်လိုက်တာကို ကျနော်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး ဘယ်လိုဟာတွေထွက်လာပါလိမ့်ပေါ့နော်။ ပျစ်လဲပျစ်သလို များလည်းအများကြီးကိုး။ ပထမတစ်လျှော့က သူ့မျက်နှာကိုသူထိအောင်ပန်းလိုက်ရော။ ကျနော်တကယ့်ကိုလန့်သွားသေးတာ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အဖေ သေးတွေများပန်းထုတ်လိုက်တာလားလို့။ နောက်တော့သတိထားမိလိုက်တာက တလျှော့ပြီးတလျော့ ဆက်တိုက်ပန်းထွက်လာတဲ့ အဖြူရည် တွေကိုပါ။ ဒုတိယအလျော့ကျတော့ သူ့ဦးခေါင်းအပေါ်ကိုကျော်ကာ ခေါင်းရင်းနံရံက မှန်ချပ်တွေကို သွားထိတယ်။ နောက်ထပ်အခြား ပန်းထုတ်တဲ့အလျော့တွေမှာတော့ ပိုပြီးမြင့်မြင့်သွားတယ်။ ကျနော်ယုံတောင်မယုံနိုင်တော့ဘူး အနည်းဆုံး ငါးကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ခြောက်ကြိမ် လောက်အထိ သုက်ရည်တွေကို တလျော့ပြီးတလျော့ပန်းထုတ်တာလေ။ သူ့မျက်နှာပေါ်တွေအပြင် အချို့က သူ့ရင်အုပ်နှင့်အတူ အမွှေးနုလေးတွေရှိတဲ့ ဗိုက်ကြွက်သားပြင်တွေပေါ် အား…နေရာအနှံ့အပြားလို့ပြောရမယ်။ ပန်းထုတ်တာအားရပြီးမှ သူ့တကိုယ်လုံး တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားပါတယ်။ ကျနော့်ပါးစပ်ကြီးဟ မြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုမယုံနိုင်စွာ ငေးမောနေခဲ့မိတာ အတော်ကြာတယ်ထင်တယ်။
ဒါ..ဒါ ကျနော်ဆိုတဲ့ ကျနော်ဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့ သုက်ရည်ဆိုတာတွေလား။ လူအတော်များများပြောနေတဲ့ သုက်ရည်ဆိုတာကြီး ပဲပေါ့။ ကျနော့်ပေါင်ကြားက နည်းနည်းစိုစွပ်သလိုဖြစ်လာတာကြောင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ စိုနေသလားလို့ခံစားရ ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ထူးထွေထပ်မစဉ်းစားမိတော့ပါဘူး။ အဖေက သူ့အိပ်ရာပေါ်မှာ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် သက်သောင့်သက်သာ လှဲလျောင်းနေပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးသုက်ရည်တွေပေပွနေတဲ့အတိုင်း ဘာမှမလုပ်ဘဲ ဘယ်လိုနေနိုင်ပါလိမ့်။ ခဏနေတော့ တံဘက်တစ် ထည် ဆွဲယူလိုက်ကာ သူ့ဘာသာသူ တကိုယ်လုံးပွတ်သပ်သုတ်သင်နေပါတယ်။ ခေါင်းရင်းအကာ မှန်ချပ်တွေ ပြီးတော့ သူ့သုက်ရည် ထိခတ်တဲ့နေရာအတော်များများကို လိုက်သုတ်ပါတယ်။ သူ့ပေါင်ကြားက ငပဲကိုကျနော်သတိထားကြည့်လိုက်တော့ တဖြည်းဖြည်း နဂိုပုံမှန်အရွယ်အစားပြန်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အိပ်ရာပေါ်ကနေဆင်း တဘက်ကို အ၀တ်ဟောင်းခြင်းထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တယ်ဗျ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျနေတဲ့ အ၀တ်တွေ ဘောင်းဘီဟောင်းတွေကိုလည်း အဖေကောက်သိမ်းလိုက်ကာ ရေချိုးခန်းထဲကို ၀င်သွားပါတယ်။ အ၀တ်ဘီရိုကိုလာမကြည့်တာ ကျနော့်အတွက် ကံတော်တော်ကောင်းတာပဲ။ ရေချိုးခန်းထဲက ရေပန်းခေါင်းဖွင့်ချလိုက်သံ ကိုကြားလိုက်ရချိန် မှာတော့ ကျနော် အ၀တ်ဘီရိုထဲကနေ အလိုလိုထွက်မိရင်း အခန်းနဲ့ဝေးရာကို သွက်သွက်လေးလှမ်းလိုက်ပါတယ်။
အချိန်ကိုသတိထားကြည့်လိုက်တော့ ၁နာရီ၃၀မိနစ်လောက်တောင်ရှိပြီ။ ပုံမှန်ဆို ကျနော်က ၃နာရီမထိုးမခြင်း အိမ်ကိုပြန်မရောက်တတ်ဘူး လေ။ တကယ်လို့ ဒီအချိန်ကြီးအိမ်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင် အဖေကမေးခွန်းတွေတသီကြီးထုတ်တော့မှာ။ ကျနော် ဇော်ကြီးဆီကိုဖုန်းခေါ်လိုက် သေးတယ် အခုပဲ ကျနော်ထွက်လာခဲ့မယ် တနေရာရာမှာစောင့်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်အိမ်ကနေထွက်လို့မရသေးဘူး အခု။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျနော့်ပေါင်ကြားကငပဲ ဘယ်လိုမှချိုးနှိမ်လို့မရအောင် မာတောင့်ဖောင်းကားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အဖေ့အခန်းထဲ မှာ ချောဆီဗူးရှိတာကို သတိရလိုက်မိရင်း အခုအချိန်က ခပ်သုက်သုက်အလစ်ချောင်းကာ သွားယူဖို့သင့်နေရော။ အခန်းထဲကိုမသိမသာ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ အဖေကရေချိုးခန်းထဲမှာ သီချင်းတအေးအေးနဲ့မပြီးသေးဘူးရေချိုးနေတာ ကြမ်းပြင်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်တော့လည်း သုက်ရည်တွေရွှဲနေတဲ့တဘက်က အပုံလိုက်ကလေးပါ။ သုက်ရည်အနံ့ဘယ်လိုရှိမလဲသိချင်တာကြောင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျနေတဲ့ တဘက်ကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး နှာဝကိုတစ်ချက်တို့ကြည့်လိုက်တယ်။ မြင်ရတဲ့ ဖြူပျစ်ပျစ်အရည်တွေကို လက်နဲ့သရပ်ယူကာ ကိုင်ကြည့်ပြန်တော့ စီးကပ် ကပ်နဲ့ဆိုတော့ အနီးကပ်စူးစပ်ကြည့်မိရတာပေါ့နော်။ “ဒါက သုက်ရည်တွေပဲ။ ဒါတွေက ငါ့ကိုလူဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့” ကိုင်ရတာ စီးကပ်ကပ်ဖြစ်သလိုအနံ့ကလည်း ဘယ်လိုအနံ့မျိုးလည်း ကျနော်မပြောတတ်ပါဘူး။ တဘက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ သုက်ရည်တွေကို ကျနော့် လက်နဲ့ယူနိုင်သမျှ သဲ့ယူကာ အခန်းထဲကနေပြေးထွက်လာခဲ့မိတယ်။
အောက်ထပ်ကို လှေကားအတိုင်းခပ်သွက်သွက်ပြေးဆင်းလာလိုက်ရင်း စတိုခန်းထဲပြေးဝင် ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကို အောက်ပိုင်းဆီ လျှောချချွတ်ပစ်လိုက်ရင်း အဖေ့သုက်ရည်တွေကို ချောဆီနေရာမှာအစားထိုးသုံးလိုက်ပါတယ်။ အလုပ်တော့ဖြစ်သားပါ။ အိုး….ဖီလင်က တကယ်မိုက်တယ်….အား… အတွေးထဲမှာ ကြီးမားထွားကြိုင်းတဲ့ အဖေ့ငပဲကြီးကိုပဲ တချိန်လုံးမြင်ယောင်နေမိတယ်ဗျ။ မိနစ်အနည်းငယ် လောက် ကြာချိန်မှာတော့ ကျနော့်ဒူးတွေတဆတ်ဆတ်တုန်လာရင်း သုက်ရည်အချို့ကိုပန်းထုတ်ပါတယ်။ ကျနော်နည်းနည်းတော့ တွေဝေ မိသလိုပဲဗျာ ကျနော့်အဖေထွက်တဲ့ သုက်ရည်ပမာဏနဲ့ယှဉ်ရင် ကျနော့်ဟာက တလျော့စာလောက်တောင်မရှိဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ အစဦး လုပ်တာမို့ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထဲမှာ ကြေနပ်ပါတယ်လေ။ ဘောင်းဘီကိုအပေါ်ဆွဲတင်ဝတ် ဇစ်ဆွဲပိတ်ကာ ဇော်ကြီးရဲ့အိမ်ကို အပြေးလေးသွားလိုက်တယ်။ ဇော်ကြီးကို ကျနော့်အဖေအကြောင်းဘာမှမပြောမိပေမဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် လိင်အာသာဖြေဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဟိုပြောသည်ပြော သည်မေးဟိုစမ်းနဲ့ နှစ်ယောက်သား အတူတူ လက်ကစားခြင်းနဲ့ စကားဝိုင်းကိုအဆုံးသတ်ဖြစ်ကြတယ် ဗျ။
နှစ်များစွာဖြတ်သန်းပြီးနောက်မှာလည်း တစ်ခါတလေဆိုရင် အဖေမသိစေဘဲ သူလိင်အာသာဖြေတာကို အမိဖမ်းဖို့ ကျနော်ကြိုးစားကြည့် မိပါသေးတယ်။ ကျနော် အသက် ၁၅နှစ်ရောက်ချိန် အဖေ့ကွန်ပျူတာကိုကိုင် ဟိုသည်ကလိကြည့်မိတော့ Adult Chartroom တစ်ခုထဲမှာ အဖေ့ profile ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ၊ သူ့ဖာသာပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကလစ်တွေကောပေါ့။ ၀ိုး….အဖေ့ငပဲဆိုဒ်က စံချိန်လွန် ၇လက်မခွဲရှိတယ်တဲ့ဗျ။ အဲ့ဒါလည်းမြင်ရော ကျနော် ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ်အမြန်တိုင်းကြည့်လိုက်တာ အလျား ၆လက်မနဲ့ ငါးစိတ်ရှိတယ်။ ဒါ အဖေ့မျိုးရိုးဗီဇအမွေဆက်ခံနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်မယ်။
အခု ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာ ကျနော့်အသက်က ၁၉နှစ်ရှိပါပြီ။ ပြီးတော့ ငပဲဆိုဒ်ကလည်း ၇လက်မနီးပါးရှိပြီဆိုပါတော့။ အဖေ့ငပဲဆိုဒ်လောက် မဟုတ်သေးပေမဲ့ ကျနော်သဘောကျတယ် အားရပါတယ်။
“မင်း ဘာလုပ်နေတာလဲ ငါ့သား?”
တံခါး လော့ခ်ျမလုပ်မိတာ တကယ့် သောက်ပြဿနာပဲ….ဟူး။
Alex Aung (27 July 2016)
Posted by Alex Aung at 4:50 PM No comments:
A Subtle Seduction✌
'မိုးက ဆက်မရွာဘဲ…. မရပ်တော့ဘူးလားကွာ?'
အိုး...စိတ်များတောင် ညစ်မိပါရဲ့။ ထင်းရှူးမြိုင်မြို့ကြီးကိုရောက်တာ ရက်သတ္တပတ် သုံးပတ် လောက်ရှိပြီ တစ်ခါမှ မိုးမစဲသေးဘူး။ သင်္ကေတနိမိတ်ဆိုးတစ်ခုလားထင်ရတယ် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲမကျင်းပမီ ရွာနေတဲ့မိုးလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက် ကံမကောင်းခြင်းဆိုတာ ကို အခုအချိန်မှာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိုအပ်နေတယ်။ ကျွန်တော့် အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းက ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ပရောဂျက်တွေနဲ့အတူအသားကျနေထိုင်ဖူးပါရဲ့။ တစ်လထက်ပိုပြီး အတူနေထိုင်ခွင့်ပေးမယ့် မိသားစုမျိုးရှာမတွေ့နိုင်လောက်အောင် ကျွန်တော့်အသက်အရွယ်က မွေးစားဖို့အရွယ်ထက်လွန်နေပြီလေ။ ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာတော့ လူငယ်တွေကိုစုစည်းထိန်းကျောင်း ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအောက်မှာ အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်လို လူငယ်တွေ ဟိုသည်ကစုစည်းပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတွေသင်ပေး မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထပ်မံမကျင် လည်ဖို့စောင့်ရှောက်ပေးကြရတာ တကယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ သူများတွေ ဘယ်လိုနေထိုင်ဆိုးသွမ်းလို့ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုပတ်ဝန်း ကျင်က လာရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိဘူး။
အရွယ်မရောက်ခင် ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကတော့ မွေးစားသူများက အတော်ချစ်ကြတာပါ။ အရွယ်ရောက်စပြုလာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့သွေးသားထကြွမှုကြောင့် သိက္ခာတွေမထိန်း ဆိုးသွမ်းမိတာကြောင့် 'နေမင်းသား'ဆိုတဲ့ လူငယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အောက်ရောက်ရပါတယ်။ မိဘမဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေ နေထိုင်ကျွေးမွေးရာစခန်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါ။ အစိုးရ နှင့် မသက်ဆိုင်ပေမဲ့ အရေးပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါရဲ့။ မိမိရှေ့ရေးအတွက် ရပ်တည်မှုကို စဉ်းစားမိသူများအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ စနစ်တွေနှင့် ထိန်းကျောင်းပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးကြောင့်၊ ရောင်းစားခံလူငယ်၊ လေလွင့်လူငယ်များ စသဖြင့်အများကြီးပဲရှိတယ်။ ထွက် ပြေးလို့တော့ မရဘူးနော်။
ဟူး...ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလို့ဆိုရမယ့် လူငယ်တစ်စုဟာ နေထိုင်ရမယ့် ပင်မအဆောက်အဦးဆီမရောက်မီ ရှေးခေတ်ကဆောက်ခဲ့တဲ့ အဆောက်အအုံပုံစံတစ်ခုမှာလောလောဆယ် စတည်းချကြရပါတယ်။ စံနမူနာပြနေထိုင်ရမှုဆိုသည့် တစ်ခုသောအရပ်ဒေသပါ။ ကိုယ့်အ၀တ်ကိုယ်လျှော်၊ ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ရှင်း ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ့်တာဝန် စသဖြင့်။ နေရာအနှံ့ကိုတော့ စက်ဘီးစီးလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ ရှုပ်ထွေးပွေလိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အသင့်။ ဒီအုပ်စုနှင့် သိပ်တော့ ကျွန်တော်မရောထွေးဖြစ်ပါဘူး။ လူမှုဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ လူတွေနှင့်တော့ အိုကေပါတယ်။
ညနေစောင်းတစ်ခုမှာ မီးဖိုချောင်ထဲ ကျွက်စီကျွက်စီနှင့် စားသောက်နေကြတယ် ။ ကျွန်တော် သူတို့တွေကို ဂရုထားမနေတော့ပါဘူး။ အဲဒါ အရွယ်တူခြင်းကြောင့်များလား?
'ထွက်မပြေးရဘူး၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပါ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တိုးတက်အောင်ကြံဆောင်ပါ'
Yeah, Yeah, Yeah မိုးကြိုးပစ်သံလို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကျွန်တော်ကြားရခြင်းပါ။ ဒါပေမဲ့ ၈ယောက်သော အခြားလူငယ်တွေက သတိတောင်မမူကြပါဘူး။ သူတို့အားလုံးက ညနေစာပြင်နေတာကိုပဲ အာရုံစိုက်နေကြပြီး ဘာပြောမှန်းတောင်သိကြရဲ့လားမသိ။ မျက်လွှာပင့်ပြီး သူတို့ဘာဆက်လုပ်လည်းကြည့်လိုက်တော့ အားလုံးအစားအသောက်တွေနှင့်လုံးထွေးနေကြတာ ရပ်တောင်မရပ်။ ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းထောင့်မှာ လှေကားထစ်တွေကဆင်းလာတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မြင်မိပါတယ်။
သူပုံစံက အရပ်ရှည်ရှည် အားကစားသမားတစ်ယောက်ကိုယ်ဟန်နှင့် တည်ဆောက်ထားတာ အထူးသဖြင့် ရေကူးသမားတစ်ယောက်နှင့်တူပါရဲ့။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အံကိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ယူနီဖောင်းဆန်ဆန်အ၀တ်အစားတွေနဲ့ အရှက်သည်းစွာဖုံးကွယ်ထားတယ်လေ။ အညိုရင့်ရင့်ဆံနွယ်တွေ မျက်ဝန်းညိုမှောင်မှောင်တွေပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ဟီး... ကျွန်တော့်ဆီကို သူလျှောက်လာတုန်ုး အာရုံထဲမှာ အ၀တ်မပါဘဲ မြင်ကြည့်ပြီးပြီ။
'ဟေး...ပိုင်ထွန်းပါ။ ကိုယ်တို့တစ်ခန်းထဲ အတူနေရမှာ'
'ကျွန်တော်က ကျော်ကျော်ပါဗျ' ကျွန်တော်အသက်ရှူမှားစွာဖြင့်အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ Jeez, ကျွန်တော့်အရှိုက်ကိုထိုးနှက်လိုက်သလိုပဲ သူ ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲကိုင်နှုတ်ဆက်ချိန်မှာ အသက်ရှူမှားသွားပါပြီ။ သူကျွန်တော့် အိတ်တစ်အိတ်ကိုဆွဲယူလို့ ရှေ့ကဦးဆောင်ပြီး လှေကား အပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာပါလာသမျှ ဆွဲသိမ်းပြီးနောက် သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားရတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အခန်းဟာ အဆောက်အအုံကြီးရဲ့ အနောက်ဖက်ခြမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာကျက်တွေရှိပြီး ပရိဘောဂတော့ သိပ်မများပါ ဘူး။ မွေ့ယာပါ ဆင်တူ ခုတင်နှစ်လုံးနှင့်အတူ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာအ၀တ်ဘီရိုတစ်လုံး။ ဒါပေမဲ့… အဲဒါပဲကောင်းပါတယ် အခြေအနေ က ယာယီလေးပဲဟာ။
'ဒါ ကိုယ့်အိပ်ယာ၊ ဒီဘက်က မင်းဟာပေါ့။ ဘီရိုဘယ်ဘက်ခြမ်းကို မင်းအ၀တ်တွေထည့်ဖို့ရှင်းထားပေးတယ်။ အစားအစာကျွေးချိန်တွေ က မနက် ၈း၀၀နာရီ၊ နေမွန်းတည့်ချိန်၊ပြီးတော့ ညနေ ၆နာရီတိတိ။ ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ရှင်း ကိုယ့်အ၀တ်ကိုယ်လျှော်ကတော့ နေ့စဉ် လုပ်ရမယ့်တောက်တိုမယ်ရအလုပ်ပေါ့။ ဒီမှာ နည်းနည်းတော့ မချောင်ဘူး' သူက စကားစမည်ပြောရင်း စည်းကမ်းအချို့ကို ပြောပြပါရဲ့။
'အောက်ကိုဆင်းပြီး ကျွန်တော့်ကိုခေါ်တာ ကျေးဇူးနော်' ရှက်ရွံ့စွာပြန်ပြီးတုန့်ပြန်လိုက်တယ်။ Damn, စကားပြောတာ အဲဒီလို ရှက်ရွံ့ စိတ်က ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်မသိဘူး။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကျွန်တော့်အပေါ်ကျရောက်နေတာ အတော်ကြာတယ် hetero တစ်ယောက် အနေ နဲ့ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း သူ gay ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး straight ဖြစ်ကြောင်း အရိပ်အမြွက်တောင်မပေးပါဘူး ကျွန်တော့်ကိုလေ။ ထုပ်ပိုးလာတဲ့အရာတွေကိုဖွင့် ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေတစ်ကိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်းတွေကို နေရာချပါတယ် ဘီရိုတွေ၊ သစ်သားအံဆွဲတွေထဲ။ အညို ရောင် သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကျွန်တော့်ရွေ့လျားမှုအတိုင်း ထပ်ကြပ်မကွာပါ။
'မင်းဆံပင်တွေကို ကိုယ်ကြိုက်တယ်' ရုတ်တရက်သူစကားစပြောတယ်။ သူစကားစပြောနေခြင်းကို သေချာဆန်းစစ်ဖို့ ကျွန်တော်မှန် ကြည့်ဖို့မလိုပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ချွေးစေးတွေနှင့် စေးကပ်နေမင့်ဟာ။ ပခုံးပေါ်မ၀ဲတ၀ဲဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်ခွေတွေကလည်း မွှေးပျံ့မယ်မထင် မလျှော်ရတာ နှစ်ရက်ရှိပြီလေ။ သူက ကျွန်တော့်လို ပုံသဏ္ဌာန်မျိုးပါပဲ။ သူတော်တော်ချောတာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဟာ လည်း အတော်ကြည့်ကောင်းသူပဲဆိုတာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်သိတယ်။ ကမ်းခြေက ရေလှိုင်းစီးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ဟန်ကို တွေးမြင် ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်တွေက နည်းနည်းကပိုကရိုနဲ့ ခွေလိပ်တဲ့ စတိုင်လ်၊ မျက်ဝန်းတွေက မျက်တောင်ရှည်တွေနှင့် ၀န်းရံလို့။ အထွေအထူးတော့ ကိုယ်ရည်မသွေးတော့ပါဘူး ကျွန်တော်က စိတ်ဝင်စားနေသူရှိရင် သူလည်ပြန်လှည့်ကြည့်လာစေနိုင်ပါတယ်။
'Thanks, ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ခေါင်းမှာဆံပင်တွေကစေးကပ်ကပ်ဖြစ်နေပြီ၊ ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရေချိုးကြမလဲဗျ'
ကျွန်တော့်ရှက်ရွံ့စိတ် တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုစိတ်ကြောင့် အဝေးပြေးကုန်ပြီပေါ့။ ဒီဘဲ နောက်မနက်မရောက်ခင် ကျွန်တော်နှင့် တစ်ခုခုပတ်သက်မှု ဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်။ ပိုင်ထွန်း ကျွန်တော်ရပ်နေတဲ့နေရာရဲ့အနောက်ဘက်က တံခါးကိုဖွင့် ရေချိုးခန်းရှိရာ စင်္ကြန်တစ်ဖက်စွန်းကိုလိုက် ပို့ပြီး အရာအားလုံးရှင်းပြပါတယ်။ သူက ရေချိုးခန်း တဘက်တွေခွဲဝေသုံးစွဲဖို့အကြောင်း စကားမဆုံးခင်မှာပဲ ကျွန်တော်အ၀တ်တွေ အားလုံး ချွတ်နေပြီ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်သူရှိရာဘက်ကို ကိုယ်ခန္ဓာကို လှည့်လိုက်စဉ်မှာ သူ့ပေါင်ခြံက အရမ်းဖောင်းကြွနေတဲ့ အရာကို သူဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီတိုပေါ်ကနေသတိပြုမိခဲ့ရပါတယ်။ သူခပ်ကိုင်းကိုင်းရပ်နေရာကနေ ခါးကိုမတ် နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ရင်း အမူအယာ ပြောင်းတယ်။
ကျွန်တော်ကလည်း အဲဒါကို သတိမမူမိဟန်ဆောင်ပြီး ရေပန်းအောက်ကို ခုန်ဝင်လိုက်တာပေါ့နော်။ ရေပန်းခလုပ်ကို အသာဖွင့် ကန့်လန့်ကာကိုနည်းနည်း ဟထားလိုက်တယ်။ သူ ကျွန်တော်နှင့်အတူ ရေလာချိုးချင်ချိုးမှာ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် နဲ့ကျန်ခဲ့ရပါတယ်။ ရေချိုးခန်းတံခါးကို သူပိတ်ပြီး အိပ်ခန်းဆီကို လမ်းပြန်လျှောက်သွားသံကိုကြားရတာပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားအောင် ကျွန်တော်က သူ့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိ။
တစ်ကိုယ်လုံး အကြိုအကြားမကျန်အောင် ဆေးကြောမွှေးပျံ့စေပြီးနောက် အိပ်ခန်းဆီကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ခပ်ကြီးကြီး တဘက်တစ်ထည်ကို ခါးမှာပတ်၊ ပြီးနောက် အခန်းတံခါးကို မခေါက်ဘဲဝင်သွားလိုက်ပါရဲ့။ ပိုင်ထွန်းက ခုတင်ပေါ်မှာ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ထိုင်ပြီးဖတ်နေတယ်။ အပေါ်အင်္ကျီမပါ။ ရှက်သွေးနည်းနည်းဖြန်းထားတဲ့ မျက်နှာနှင့်။ အိပ်ရာခင်းအောက်မှာမပေါ့်တပေါ်ဖြစ်နေတာ Lube ဘူးအဖုံးဆိုတာ ကျွန်တော်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဝင်လာတော့ သူ့နှုတ်က 'ဟိုင်း'လို့ပြောပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကိုမကြည့်။ ကျွန်တော် သူ့ ရင်အုပ်ကိုမျက်စိရောက်တော့ သူ့ရင်အုပ်ဟာချောမွေ့နေပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေက အနက်ရင့်ရင့်။ သူ့ဗိုက်မှာ6pack မရှိပေမဲ့ အဆီပိုမရှိချပ်ရပ်လို့။
'အင်း...ဒိုင်ဗင်လည်းထိုး၊ ရေလည်းငုပ်တယ်။ ဘယ်လိုတွေးမိလို့လဲ?' သူကပြုံးပြီး ကျွန်တော့်ကိုပြန်မေးတယ်။
'ရေကူးအားကစားသမားတွေတော်တော်များများက ဒီလိုဘော်ဒီပိုင်ရှင်တွေလေ' သူဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲ နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ကာ မဂ္ဂဇင်းကို ပြန်ဖတ်နေပါတယ်။ အ၀တ်အစားတွေလဲလှယ်တော့ ချည်သားဘောင်းဘီပါးပါးတစ်ထည်ကို မ၀တ်မဖြစ်ဝတ်တာပေါ့။ ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းအောင်လှတယ်လို့ အပြောခံရတဲ့ငပဲကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ပိုင်ထွန်းစာဖတ်ချင်ယောင် ဆက်ပြီးဟန်မဆောင်နိုင်တော့။ သူ...ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို အသားလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေကို မ၀ယ်ခင်စစ်ဆေးနေတဲ့အတိုင်း အာသာငမ်းငမ်းဖြစ်စပြုပြီ။ ကျွန်တော်ဘာမှ သတိမပြုမိဟန်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံးဝါသနာက နှိုးဆွနိုးထစေတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်လေ။
ညစာစားကြပြီးနောက် အောက်ဆုံးထပ်က ပင်ပေါင်စားပွဲနားမှာ တခြားလူတွေနှင့် စကားဆက်ကြကာ အတန်ကြာမှ အိပ်ခန်းဆီပြန်ခဲ့ ကြပါတယ်။ တခြားလူငယ်တွေကလည်း သူတို့အိပ်ခန်းတွေဆီဦးတည်သွားကုန်ပါပြီ။ ပိုင်ထွန်းတစ်ယောက် ရေမြန်မြန်ချိုးပြီး အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာတာက ကျွန်တော် အ၀တ်မပါဘဲ အခန်းထဲရပ်နေတာမြင်ချင်လို့ထင်။
'ညပိုင်း ကျွန်တော်တို့အခန်းတွေဆီ စစ်ဆေးရေးလုပ်သေးလား?'
'ကောင်းပါ့, ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က အ၀တ်မပါဘဲ အိပ်တတ်လို့ဗျ' သူနည်းနည်း shock ဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့ ဘာမှတော့စကား မဆိုဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ခုတင်ကိုယ်စီပေါ် တက်လှဲလိုက်ပြီး ၁၀မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ ကျွန်တော်အိပ်ပျော်ချင်ယောင်ဆောင် လိုက်ပါတယ်။ တော်သေးတာ အခန်းအပူချိန်ကမြင့်တော့ ကျွန်တော့်စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပိုလွယ်တာပေါ့။ ခေါင်းအုံးပေါ် ခပ်လျော့လျော့လဲလျောင်း၊ စောင်ပါးကို ကန်ထုတ်ပြီးနေလိုက်တယ် ပိုင်ထွန်းကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရတာပေါ့ သူမြင်ချင်နေတဲ့အရာ ကို။ ဘာအသံမှမပြု အဲဒီအတိုင်းလှဲနေ အိပ်နေလိုက်တယ်။ သူ့နှုတ်ဖျားမှ လေချွန်သံသဲ့သဲ့နှင့် အတူ ခပ်တိုးတိုး ညည်းညူသံတစ်ချက် ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို လွှမ်းခြုံကြည့်ပြီး ကြည့်ပြီ။ အခုကျွန်တော်ဘာမှဆက်မလုပ် စောင့်ဆိုင်းခြင်းသာ။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်ရင်တော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့လူတွေကို ဆွဲဆောင်ရာမှာ လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။
သိပ်တော့မကြာပါဘူး ပိုင်ထွန်း သူ့အိပ်ယာကနေထပြီး ကျွန်တော်ရှိရာ တဖြည်းဖြည်းကပ်လာသံကိုကြားရပါတယ်။ ကျွန်တော်အသက်ရှူ သံကို အာရုံစိုက်ပြီး သတိထားရပါရော။ ဒါမှ သူကျွန်တော်တကယ်နိုးနေသေးမှန်း သူမသိမှာ။ စက္ကန့်အနည်းငယ် အကြာမှာတော့ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ပေါ်ကို သူ့လက်ချောင်းလေးတွေနှင့် ခပ်ဖွဖွ ပွတ်သပ်သလို ကျွန်တော့်ငပဲကိုရော ငြင်ငြင်သာသာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းရတာအတော်တော့ခက်သား၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ထိန်းနိုင်မှာပါ။ ဒီလိုလုပ်တာ ဒါရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတာထက် ရင်ခုန်ဖို့ကောင်း မယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲက အစွမ်းကုန်မာတောင်နေပြီ။ ပိုင်ထွန်းက ကျွန်တော် အိပ်ပျော်နေဆဲဆိုပြီး ဟိုကိုင်ဒီကိုင်။ ကျွန်တော်မနိုးသေးဘူး ပုံဟန်ဖမ်းထားတာ အိုကေပါ့မလား။
'ဟေး...ကျော်ကျော်' သူကျွန်တော့်ပခုံးကို ကိုင်ကာလှုပ်ရင်းခပ်တိုးတိုး နှိုးတယ်။
'ဟူး...ဘာလဲဗျ' ကျွန်တော်အိပ်ချင်မူးတူးပုံစံနှင့် ထထိုင်လိုက်တယ်။ 'ဒီလို ငါ..မင်းကို လုပ်ကိုင်နေတာ စိတ်မဆိုးပါဘူးနော်' သူပြုံးဖြဲဖြဲနှင့် စကားဆိုတယ်။ ခါတိုင်းလူတွေလိုပဲ ကျွန်တော့်ကစားပွဲအောင်မြင်ပါပြီ။ ကျွန်တော် အားရပါးရပြုံးပြလိုက်ကာ သူ့ဦးခေါင်းကိုကိုင် ကျွန်တော့်ငပဲဆီကိုတေ့ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေထဲ အားပါးတရထည့်သွင်းလိုက်ရင်း အငမ်းမရစုပ်မျိုပါရော။ ကျွန်တော် သိတာပေါ့ ရေချိုးခန်းက အပြန် တဘက်လေးခါးမှာပတ်ထားပြီး ၀င်လာတာကို သူကြည့်နေကတည်းက။
သူကျွန်တော့်ငပဲအရင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း သူ့လျှာတွေ အာတွေနှင့်အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ သူ့လျှာဖျားလေးဟာ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကစားနေတာများ ကြက်သီး ထလောက်တယ်။ သူ့ပါးစပ်ဟာ ငပဲထိပ်ဖြားလေးကိုမျှဉ်းပြီး စုပ်နေတာအတော်မိုက်တာပေါ့။ ကျွန်တော်များ မျက်ဖြူစိုက်နေပြီလား ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးသွေးတွေပူနွေးလာကာ အရေပြားတွေတောင် တင်းတောင့်လာသလိုပါ။ ကျွန်တော် သူ့ခေါင်းကို ကိုင်ရင်း အသာတွန်းလိုက်တော့ သူ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို မော့ကြည့်တယ်။
'ချောဆီဘူး သွားယူလိုက်တော့' ကျွန်တော်လှိုက်မောစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ 'မင်း -ိုးတာကို ခံချင်နေပြီ' သူကျွန်တော့်နံဘေးကိုတွား တက်လာပြီးနောက် ချောဆီဆွတ်ထားတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေနှင့် ကျွန်တော့် ခရေပေါက်ဆီ သုတ်လိမ်းပါတယ်။ ချောဆီပုလင်းကိုယူ ကျွန်တော့်လက်ထဲနည်းနည်းထည့်ကာ သူ့ငပဲကိုပွတ်လိမ်းလိုက်ပါရဲ့။ Wow! သူ့ငပဲက အတော်ထွားတာပဲ ပြီးတော့ အရမ်းမာနေပြီ။ နောက် တော့ ကျွန်တော် သူ့တင်ပါးအစုံကို ပွတ်သပ်နှိပ်နယ်လိုက်တယ်။ သူသက်ပြင်းသဲ့သဲ့ချကာ အိပ်ယာပေါ်အသာလှဲလိုက်ရင်း ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းပါလေရဲ့။
ကျွန်တော့်ပခုံးအစုံကို အသာအယာ သူဆွဲယူရင်း တစ်ဖက်လှည့်ကာ ကုန်းစေပါတယ် သူက။ ကျွန်တော်ကလည်းအလိုက်တသင့် ဂဏန်း နံပါတ်လေးကို ပြောင်းပြန်မှောက်လိုက်သလို တင်ပါးတွေကိုထောင် ရင်အုပ်ကို မွေ့ယာပေါ်နှိမ့်ကပ်ပေးလိုက်တယ်။
သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့် တင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက် ပွတ်သပ်ပြီးမှ ခရေ၀ထဲကိုတစ်ထစ်ခြင်းဖိသွင်းပါရော။ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော်လက်ခံဖူးသမျှ ငပဲတွေထဲ အကြီးဆုံးပါပဲ။ တော်ပါသေးရဲ့ သူ့ပစ္စည်းတဖြည်းဖြည်းသွင်းတာ သိပ်မနာလို့ရယ် အလိုက်တသင့်အဆင်ပြေလို့။ ကျွန်တော့်ခါးကို သူ အားပြုရင်း ခပ်ဖြေးဖြေးအသွင်းအထုတ်သူ စလုပ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် နှေးနေရာကနေ သွက်သထက်သွက်လာတယ် ဆောင့်ချက် တွေဟာ။ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်နှင့် မှီနိုင်သမျှ သူ့တင်ပါးကိုနောက်ပြန်ကိုင်ကာ ကျွန်တော့်ဆီဆွဲယူဖြစ်ပါရဲ့။ သူ့မွှေချက် ဆောင့်ချက် တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် တကယ့်အရသာပဲ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှာ ညည်းညူသံကျယ်ကျယ်ထွက်လာတော့ ပိုင်ထွန်း ကျွန်တော့် ပါးစပ်ကို သူ့လက်နှင့် လှမ်းပိတ်လိုက်ပါတယ်။
Shit! ကာထားတဲ့ နံရံတွေက တကယ်ပါးလိုက်တာ။ ကျွန်တော် ခေါင်းကိုငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း ခေါင်းအုံးဆီမျက်နှာအပ်လိုက်ကာ အသံတိတ်ဖို့ကြိုးစားရတာပေါ့။ သူ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးချရတာအတော်သဘောကျ ဟန် တူရဲ့ ခပ်သွက်သွက် သူ့ခါးကိုလှုပ်ရှားနေတာလေ။ ကျွန်တော့်မှာ ဆိမ့်ကနဲအရသာခံစားရင်း အသံမထွက်အောင်တော့ ထိန်းရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပခုံးသားတွေကို သူ့လက်သည်းနှင့်ခြစ်တော့ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကြွက်သားတွေက သူ့ငပဲကို ပိုညှစ်ပြီပေါ့။ သူ့ခြေထောက်တွေ ဟာ တုန်ခါလာပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော် ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ဆိုက်ဖို့နီးကပ်လာပြီ စတင်လာပြီသိလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပိုင်ထွန်း။ သူ တစ်ချက်ခြင်းဖိကပ် ဆောင့်လိုက်ရင်း အတွင်းပိုင်းဆီ သူ့အရည်တွေ ပစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း မရှေ့မနှောင်း အိပ်ယာခင်းပေါ် ပန်းထုတ်မိတာပါပဲ။ ပိုင်ထွန်း အသက်ရှူသံမောမောကို နောက်ဖက်ဆီက ကြားနေရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်လည်တိုင် ကို အနမ်းပေးတာ ကျွန်တော့်ကျောရိုးတစ်လျှောက် တဆတ်ဆတ်တုန်သွားစေပါရော။
'Fuck, ငါ့အတွက်တော့ အရမ်းကောင်းပဲကွာ ဖီလင်က” ကျွန်တော့်နားရွက်နားကပ်ပြီး တိုးတိုးပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ဘက်ကို ပြန်လှည့်ပြီး သူ့နဖူးကို အားရပါးရ အနမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။
'နောက်တစ်ကြိမ်လောက် ကျွန်တော်တို့ ထပ်လုပ်ကြတာပေါ့' ကျွန်တော် ရှက်ရွံ့ရွံ့နှင့် တုန့်ပြန်စကားဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာသည်အထိ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကို ဖုံးထားခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတိုင်း ညဘက်အိပ်ဖို့ အိပ်ခန်းတွေဆီသွားခဲ့ပြီဆိုမှ ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားဖြစ်ပါရော။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးစလုံး ကျေနပ်နေမှု သာယာနေမှုတွေဟာ တစ်နေ့နေ့မှာတော့ သည့်ထက်ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိလာမယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်နိုင်ပါပြီ။
'ကျော်ကျော်....ရာသီဥတုက တစ်မျိုးပဲ ပြတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်လေကွာ'
Alex Aung (13-3-11)
Posted by Alex Aung at 5:24 PM No comments:
လက်သမားအတတ်ကို ဘယ်လိုတတ်ခဲ့သလဲ? (အပိုင်း နှစ်)
How I Learned To Masturbate (Part Two)
လူတွေအနေနဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကာလမှာ လိင်ကိစ္စအကြောင်းကို ဘယ်လိုစတင်တွေ့ရှိသိမြင်ခဲ့သလဲဆိုတာ အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ခင်မင်မိသော လူအချို့ကတော့ သူတို့ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြင်ပွင့်လင်းလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဇာတ်ကြောင်းတွေကို သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုမှုနဲ့အတူ အမည်ပြောင်းလဲရေးသားပြီး ကျနော် ပြန်လည် ရေးသားပြပါမယ်။ အကြောင်းအရာ ပတ်ဝန်းကျင် မနီးရိုးစွဲတူညီမှုကင်းတဲ့ လူတွေကိုရွေးချယ်ပြီး သူတို့ဘယ်လိုများ လိင် အာသာဖြေတဲ့ကိစ္စကို တွေ့ရှိတတ်မြောက်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဖော်ပြတာပေါ့နော်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ပြန်ပြောင်းတွေးတော အမှတ်တရမှုအကြောင်းအရာများဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးသက်သက်မဟုတ်သလို ပြင်ဆင်တန်ဆာဆင်ထားချက်များမပါဝင်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ပြန်ပြောင်း အမှတ်ရမှုများအပေါ် များသောအားဖြင့် သူတို့စကားလုံးတွေအတိုင်းပြန်လည်ဖော်ပြရေးသားနိုင်ဖို့ ကျနော်ကြိုးစားထားချက် များဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
“ဘယ်လိုပြောရမလဲ….ရှစ်နှစ်အရွယ်လောက်ကစပြီး ကိုယ့်ငပဲကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်တဲ့အခါ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ကျနော် သတိပြုမိခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ဘယ်လိုကနေစပြီး အကြောင်းဖန်လာလဲဆိုတော့ အဲ့အသက်အရွယ်လောက်က သစ်ပင်ပေါ် တက်ဆော့ရင်း ပြုတ်ကျခဲ့တာမှာ ကျနော့်ကို အပူပေးထားတဲ့အခင်းလေးပေါ်မှာ လှဲနေစေဖို့ ဒေါက်တာက မာမီ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ အဲ့တာ လေးက တကယ့်ကိုနွေးနေပြီးတော့ လှဲနေရတာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျ”
တစ်ခါတလေ ပူတယ်ထင်ပြီးလှိမ့်လိုက်မိတဲ့အခါ ပူနွေးနေတဲ့အခင်းပေါ် မှောက်လျက်သားဖြစ်ကရော။ ကျနော့်ဗိုက်သားနဲ့ အခင်းကြား ငပဲလေး ညှပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင် နွေးပြီးခိုးလိုခုလုဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်းမတ်ထောင်လာသလိုပဲဗျ။ နည်းနည်းလေးများ ဟိုသည်ရွှေ့ လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင် ငပဲနဲ့အပူခင်းက ပိုပိုထိတဲ့ပြီး ငပဲကပိုမာလာရပါတယ်။ ကျနော့်ငပဲက ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတာဆိုတော့ ထိပ်အဖုနားက သွေးကြောတွေက အပူငွေ့ကိုပိုမို အာရုံခံမိသလိုဖြစ်ပြီး ထလာတာဖြစမယ်။ တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်ပဲ အပူပေး ထားတဲ့အခင်းကိုသုံးရတာပါ။ သုံးတဲ့အကြိမ်တိုင်းလည်း ပက်လက်လှန်မနေဘဲ သူ့အပေါ်လူးလှိမ့်နေမိတာကြီးပါပဲ။ ခပ်နွေးနွေးလေး ဆိုတော့ တင်တွေကိုပဲထိထိ ငပဲကိုပဲထိထိ ဖီလင်က good ပါတယ်။
အစတုန်းကတော့ အ၀တ်စနဲ့ထိတွေ့ပွတ်သပ်နေရတာကို သဘောကျနေတာ နောက်ပိုင်းတော့ ငပဲကိုထိတွေ့ကိုင်တွယ်ရတာ ကောင်းမှန်းသိလာတာကြောင့် ပိုပိုပြီးနှိုက်ပြုကိုင်တွယ်နေမိတာပေါ့နော်။ ရေချိုးတဲ့အခါမှာလည်း ငပဲကိုကိုင်ပြီးဆေးနေတာအကြာကြီး၊ အိမ်သာတက်တဲ့အခါမှာလည်း ငပဲကိုဘာရယ်မဟုတ် ကိုင်ထားရော၊ တစ်ခါတလေ ကျောင်းစာတွေလုပ်ရင်း ထိုင်ခုံမှာကျောမှီထိုင်ရင်း ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုပြီး ကလိနေတတ်သေးတာပါ။
ဘယ်လိုပြောရမလည်းမသိ ကျောင်းအတန်းထဲက ယောက်ျားလေးတွေအတော်များများနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့ အတန်းဖော်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ကျနော့်ငပဲပြမိသလို သူကလည်းပြန်ပြတယ်ဗျ။ ကျောင်းက ယောက်ျားလေးအ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် မနီးမဝေးက သစ်တောထဲမှာပေါ့နော်။ ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ်ကိုင်ကစားဖြစ်ကြတာပါပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းကြတော့ လိင်အာသာဖြေကြတဲ့ သဘောဖြစ်လာ ကြတယ်လေ။ ကျနော်တို့တွေ လူလစ်တိုင်းလုပ်ဖြစ်နေကြတာများ Grade VI ရောက်တဲ့အထိပါပဲ။
ကျနော်တို့အတန်းထဲက ကျော်ကျော်ဆိုတဲ့ကောင်က လူပျိုအရင်ဆုံးဖြစ်တယ်ထင်တာပဲ။ သူ့ကိုယ်ကခပ်ထွားထွားဖြစ်သလို အားသန် တာလည်းအလွန်ဗျ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုသူကသိတော့ တစ်ခါတလေကျနော်တို့နဲ့အတူတူလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ လုပ်ရင်း လုပ်ရင်းနဲ့ အရှိန်ရလာမှသူက အမြန်ရပ်ရပ်ပြစ်တတ်တာတွေ့ရတာကြောင့် ကျနော့်သူငယ်ချင်းကို ကျော်ကျော်ဘာကြောင့် အဲ့လိုလုပ်နေရတာလဲလို့မေးမိရော။ အဲတာ သုက်ရည်ထွက်ချင်လာသလိုဖြစ်တာကြောင့် မထွက်တော့အောင်ဆက်မလုပ်တာတဲ့လေ။ သုက်ရည်ဆိုတာဘာလဲလို့ သူ့ကိုမေးတော့ ဘာဆိုတာပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်နဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတို့က တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လောက်တော့ အတူလက်ကစားဖြစ်ကြတယ်။ တစ်ရက်တော့ ..အဲ…သုက်ရည် အကြောင်းပြောတာနားထောင်ပြီး လေးလလောက်အကြာ သူငယ်ချင်းက သူတို့ခြံထဲကသစ်ပင်ပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့ အိမ်အသေး လေးစီလာဖို့ကျနော့်ကိုခေါ်ပါတယ် တစ်ခုခုပြစရာရှိပါသတဲ့။ ဟဲ…တွေးကြည့်လေဗျ…သူ သုက်ရည်စထွက်တာကိုလုပ်ပြတာ ကျနော့်ကို လေ။ ဆေးရည်အပျစ်လေးလိုပဲ ဒါပေမဲ့ အရည်ကြည်လေးပဲ။ တစ်လလောက်ကြာတော့ ကျနော်လည်းအရည်ကြည်ထွက်တတ်ရော သူ့ဟာ ကရင်မ်လို ဖြစ်နေရောထွက်တဲ့ဟာတွေက။ ကျနော့် အသက် ၁၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လောက်မှာတော့ ခပ်ဖြူဖြူအရည်တွေ ပန်းထုတ်တတ်ခဲ့ပါပြီ။ အခုပြောပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့ သူရယ် ကျနော်ရယ် တစ်ပါတ်ကို အကြိမ်များများ အတူလုပ်ဖြစ်နေကြတယ်။
“ကျနော်တို့အိမ်နားက အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ရေကူးကန်မှာအစပျိုးခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ဗျ။ အဲ့မှာက အိမ်နီးနားချင်းတွေထဲ ရေကူး ၀ါသနာပါသူ လူငယ်လေးတွေ တနင်္ဂနွေ ဘုရားကျောင်းတက်ပြီးပြန်လာတဲ့နေ့ ဒါမှမဟုတ် ပါတီသဘောမျိုးစားသောက်ပွဲကျင်းပတဲ့ နေ့တွေဆိုရင် စည်စည်ကားကားဖြစ်နေတတ်တယ်။ အသိအုပ်စုလေးတွေရှိသလို ကိုယ့်ရပ်ကွက်ကမဟုတ်တဲ့အခြားရပ်ကွက်မှ လူငယ် အုပ်စုလေးတွေလည်းရှိကြတာပေါ့။ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းအုပ်စုမဟုတ်တဲ့ အခြားရပ်ကွက်အုပ်စုက စည်သူဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ မျက်မှန်း တန်းမိနေတာကြာပါပြီ။ သူ့အသက်က ၁၃နှစ်လောက်ရှိပြီး ကျနော်ကတော့ ဆယ်နှစ်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ နှစ်ယောက်သား ရေ အတူကူးခတ်ကစား တစ်ယောက်နောက်ကို တစ်ယောက်က လိုက်လံဖမ်းသည့်သဘော ကစားကြတာပါ။
Lifeguard သဘောထားတဲ့ ဦးလေးက လူကြီးတွေကူးဖို့အဆင်မပြေချိန်ဆိုရင် ၀ီစီမှုတ်အချက်ပေးတတ်တော့ ကျနော်တို့ ကလေးတွေ ရေကူးကန်ထဲကတက် ရေပန်းခေါင်းတွေ စီနေအောင်ထားတတ်တဲ့ ရေချိုးခန်းထဲ သွားတတ်ကြတာပေါ့။ ရေပူရေအေးလည်းချိုးလို့ရ သလို ရေပန်းခေါင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား ထွင်းဖောက်မမြင်ရတဲ့ ပလတ်စတစ်လိုက်ကာတွေ ဆွဲကာလို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတာကြောင့် စည်သူနဲ့ ကျနော် ရေပန်းခေါင်းတစ်ခုအောက်မှာ အတူချိုးဖြစ်ကြတယ်။ လိုက်ကာတွေကလည်း ခြေဖျားတွေကလွဲလို့ အပေါ်ပိုင်းကိုယ် ခန္ဓာတွေကို လုံးဝမမြင်နိုင်ပါဘူး။
စည်သူက ကျနော့်ထက်လည်းအရပ်မြင့်သလို ရေကူးတဲ့အခါဝတ်ရတတ်တဲ့ ခပ်ကြပ်ကြပ်ဝတ်စုံတစ်မျိုး jammers ကိုဝတ်ထားပြီး ကျနော်ကတော့ ရိုးရိုးဘောင်းဘီတိုကို ၀တ်ထားတတ်တယ်လေ။ စည်သူက သူဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကို အောက်အနည်းငယ်ဆွဲချ လိုက်ချိန် သူ့တင်ပါးတွေကို စက္ကန့်နည်းနည်းလောက်တော့ မြင်ရတယ်။ အဲတာလေးကိုပဲ ပျော်စရာ ရယ်စရာအဖြစ် ကျနော်က သဘောကျ ယူဆပြီး ကျနော်လည်း အဲ့သလိုလျှောချတာပေါ့။ နှစ်ဦးသား တစ်ယောက်ဘောင်းဘီတစ်ယောက်ဆွဲချပြီး ရယ်နေကြတာ စည်သူ့ဘောင်းဘီ ရှေ့ပိုင်းကို ယောင်ပြီးဆွဲချလိုက်မိတဲ့ ခဏတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ ငြိမ်သက်မိကြသေးတယ်။ နောက်တော့ သူကလည်း ကျနော့်ဘောင်းဘီရှေ့ပိုင်းကိုဆွဲချရော။
မပေါ့်တပေါ် စနောက်ကြတာ အကြိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ဖြစ်နေကြပြီးနောက်မှာတော့ အတူရေချိုးဖြစ်ချိန်တိုင်း စည်သူက သူ့ငပဲနဲ့ ရွှေဥ တွေကို ဘောင်းဘီလျှောချွတ်ပြီး ပြတတ်တယ်။ ကျနော်လည်း ဟိုသည် သေချာကြည့်တော့ သူ့ငပဲဝန်းကျင်မှာ အမွှေးအမျှင် အနည်းငယ်ပေါက်နေပြီဆိုတာ တွေ့ရပါရဲ့။ သူ့ငပဲကို ကျနော်သေချာကြည့်တာကို စည်သူက အတော်သဘောကျတယ်ဗျ။ သူ့ငပဲကြီး ကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီး အထက်အောက် ငရုပ်ဆုံစထောင်းပြတတ်သေး။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ “ဒီကောင်တော့ သူ့ငပဲနဲ့သူ ဆော့ကစား တယ်” လို့တွေးခဲ့တာပေါ့နော်။ စည်သူ့ငပဲက မမာ့တမာဖြစ်လာတတ်ပြီး လေးလက်မ ငါးလက်မ၀န်းကျင်လောက် ရှည်လာ တတ်တယ်။ သူ့ငပဲလေးကိုဆွကစား မာတောင့် ရှည်ထွက်လာချိန်ဆို ဘောင်းဘီကိုအပေါ်ဆွဲတင်ပြီးဝတ်တော့ ထင်းကနဲဖြစ်နေရော။ ကိုယ်ပြသူပြ တွေလုပ်ပြီးနောက် ရေကူးကန်ဘက်ကို ကျနော်တို့ပြန်လှည့်တတ်ကြပါတယ်။
ဘယ်လိုစတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပဲပေါ့လေ။ ရေကူးကန်ဘေးက ရေချိုးခန်းထဲ စည်သူ သူ့ငပဲမာတောင့်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်တယ် ဆိုတာတွေးပြီး အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်ကြည့်တော့တာပါပဲ။ အစတုန်းကတော့ လိင်အာသာဖြေတဲ့အဆင့်ထိမရောက်ဘူး မာတောင့် လာအောင် လက်ကစားကြည့်တာပဲရှိပါတယ်။ ကျနော့်အခန်းထဲ ဒါမှမဟုတ် ရေချိုးခန်းထဲလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ သိပ်ပြီးအချိန်မကြာတတ်ပါဘူး။ အရည်ထွက်တာမျိုးလည်း သိပ်သတိမထားမိခဲ့သလိုပါပဲ။
လိင်အာသာဖြေမှုနည်းလမ်းကို ကျနော်ဘယ်လိုတတ်မြောက်ခဲ့တာလဲဆိုတာဖြေရရင် အခြားငနဲ လုပ်တာကိုင်တာကိုမြင်ကြည့်ပြီး အရင်ကမသိတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ စခဲ့တာပါလို့။ ဒါ လိင်တူကြိုက်စိတ်အခြေခံတစ်ခုလို့မထင်ပါဘူး ယောက်ျားလေးတွေ လုပ်တတ်တဲ့ သဘောသဘာဝတစ်ခုလို့ပဲထင်ပါတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းပြီးတဲ့အထိ ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် ဂေးလို့မထင်ခဲ့ဘူးဆိုပါတော့။ ရိုးသားစွာ ပြောရရင် သန်မာထွားကြိုင်းပြီး အလန်းစားဖြစ်နေတဲ့ စည်သူရဲ့ အသွင်အပြင်ကို နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဆုံလို့ မြင်ရချိန်မတိုင်ခင်အထိ ဂေးမဟုတ်ဘူး straight ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုပဲလို့တွေးနေခဲ့တာပါ။
"ကျနော့်အစ်ကိုက အဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာဗျ။ သူက ‘ဟေး…ဇေယျ မင်းငပဲကိုဆွဲထုတ်ပြီး မာတောင့် ရှည်လာအောင်လုပ်ကြည့် မိုက်တယ်ကွ’တဲ့။ သူ့ငပဲကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ လုပ်ပြတယ်လေ။ နောက်တော့ ကျနော်လည်း ကြိုးစား ကြည့်တယ်။ သူပြောတာမှန်တယ်ဗျ”
"သူ့အသက်က ဆယ်နှစ်၊ ကျနော့်အသက်က ၈နှစ်"
"ကျနော့်ဖာသာကျနော် ချိန်းကြိုးတစ်ခုနဲ့ပွတ်သပ်မိရင်း သိခဲ့တတ်ခဲ့တယ်ပြောရမယ်။ ဟုတ်တယ် တကယ်ဗျ။
ကျောင်းအားကစားခန်းမထဲက တန်းလန်းထားတတ်တဲ့ ကြိုးတွေပေါ်တွယ်တက်ရင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ငပဲမာတောင့်တာ ဒါမှမဟုတ် လိင်အာသာပြေသွားတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေအကြောင်း ခင်ဗျားကြားဖူးလား။ ပြောပြမယ်လေ….ကျနော်တို့အိမ်ဝရံတာမှာ ကာထားတဲ့ စတီးပိုက်တွေပေါ် ဖက်တွယ်တက်တဲ့အခါရယ် သစ်ပင်တွေပေါ်ကုပ်ကပ်ဖက်တွယ်တက်တဲ့အချိန်တွေမှာ သတိထားမိတယ်။ ယောက်ျားလေး အများစုလိုပါပဲ ဟိုတက်သည်တက်ပေါ့ အမြင့်တစ်နေရာရာကို။
ကျနော်က အဖေ့အလုပ်ရုံရှိတဲ့ စက်မှုမြို့သစ်ထဲမှာလိုက်နေပါတယ်။ အဖေက Stainless Steel Design အလုပ်ရုံထောင်ထားတာ ဆိုတော့ အဲ့သည့်ပစ္စည်းတွေကြား ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ ဆော့ကစားနေတတ်တာ နာရီပေါင်းများစွာပါပဲ။ ပထမဆုံးအကြိမ် ခင်ဗျားပြောတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်တုန်းက ကျနော့်အသက် ဆယ်နှစ်ပဲရှိဦးမယ်။
စတီးလ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ လက်ရန်းတိုင်အချို့ကို သတ္ထုချိန်းကြိုးလေးတွေနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ကျနော် အခုထိမှတ်မိတယ်။ ချိန်းကြိုးဆိုလို့ ခပ်သေးသေးလေးတွေတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲ့ဒီချိန်းကြိုးတွေပေါ် လျှောထိုင်ကစားချိန်တုန်းက ကျနော် ဘောင်းဘီတို ၀တ်ထားတယ်ဗျ။ ချိန်းကြိုးမှာက အဖုအဖုလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ဖင်နဲ့ဖိပြီး ပွတ်ပြုရတာ ကောင်းသလိုခံစားရတယ်။ ဘယ်လိုစကားလုံးတွေ ကိုပြောရမလဲမသိဗျာ။ ကျနော့်တင်သားဆိုင်နဲ့ အဲ့ဒီအဖုလေးတွေဖိပွတ်ရတဲ့အချိန် တစ်ခုခုနှိုးဆွသလိုဖြစ်တာလေ။ ကျနော့် တင်သားတွေ ကို ခဏခဏဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်တာများ ငပဲက အတော့်ကိုမတ်ထောင်လာရော။
ကျနော် အဲ့ဒီ အဖုလေးတွေပါတဲ့ ချိန်းကြိုးကို ငပဲနဲ့တို့ထိလိုက် ဖိပွတ်လိုက်နဲ့ဟုတ်နေတာပါပဲ။ ကျနော့်ငပဲထဲ ပျားကိုက်ခံရလို့ စူးနေ သလိုမျိုးခံစားရတယ်။ ကျနော်လုပ်နေတာကို တစ်ယောက်မှမမြင်ခဲ့ဘူး။ စတီးလ်တိုင်လက်ရန်းကို လက်နဲ့ထိန်းကိုင် ကျနော့်တင်ရယ် ငပဲရယ်ကို ချိန်းကြိုးနဲ့အထက်အောက်ပွတ်သပ်ပေါ့လေ။ ကျနော် ပိုပိုပြီး အာရုံစိုက်ကစားလေ ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုရဲ့ ရှေ့ပိုင်းက ဖီလင်တွေ တိုးတိုးလာလေ။ ချိန်းကြိုးကအဖုလေးတွေနဲ့ဖိပွတ်လေ ကျနော်အရင်က မခံစားဖူးတဲ့ ခံစားချက်တွေတိုးလာလေပါပဲ။ ကျနော့်ငပဲထဲ သွေးခုန်နှုန်းတွေ တဆတ်ဆတ်တိုးနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ ကျနော့်ကျောထဲရေခဲသွားသလို အေးစိမ့်သွားရော။ အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်တာပါလိမ့်?
ကျနော် အလျင်အမြန်ပဲ အလုပ်သမားနားနေခန်းထဲပြေးဝင်ပြီး ဘောင်းဘီကိုလှစ်ဟကြည့်လိုက်တယ်။ ကျနော့်ငပဲက အစွမ်းကုန် မတ်ထောင်နေတာပါ ဒါပေမဲ့ သာမန်လိုပဲထင်ပါတယ်။ လိင်တံထိပ်အရေပြားက အတော်အထိအခိုက်မခံတာ ပွတ်သပ်လှုပ်ရှား တာကိုလေ။
ကျနော် မလုပ်တော့ဘူး ဘာဖြစ်မယ်မှန်းမသိဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ နောက်နေ့ကျတော့လည်း လူလစ်တဲ့အချိန် ကုန်ချောသိုလှောင်တဲ့အခန်းထဲ ပြန်လာဝင်ပြီး လုပ်ကြည့်ပြန်တယ်။ ကျနော့်အခန်းထဲက စားပွဲခုံစောင်းနဲ့ပွတ်သပ်ကြည့်သေးတယ်။ မကြာခင်မှာတော့ ကိုယ့်လက်ကို ကိုယ်သုံးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
" ကျနော်မှတ်မိတယ်….ဟုတ်ကဲ့။ မနက်ခင်း အိမ်သာကြွေကမုတ်မှာ ကျနော်ထိုင်နေရင်း ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိ ငပဲခေါင်းကို ကိုင်ကြည့်ပြီး စကစားဖြစ်တာပဲဗျ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူး ကောင်းတာပဲသိတယ် အဲ့အချိန်က။ တဖြည်းဖြည်း မာပြီး အပေါ်ကို မတ်လာတယ်လေ။ ငပဲကိုလက်ကမလွှတ်ဘဲ ဆက်ကစားရင်း ဆက်ကစားရင်း စိတ်ထဲ ချောက်ကမ်းပါးထဲခုန်ချရသလို ခံစားလာရ တယ်။ ရင်ခုန်သံတွေလည်း မြန်လာသလိုပဲဗျ။ အခြားထွေထွေထူးထူးမရှိရင် အိမ်သာတက်တာမကြာတဲ့ကျနော် အခုတော့ အချိန် တော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီ ပြောရမယ်။
ကျနော့်ငပဲကိုထိကိုင်ပွတ်သပ်နေမိလို့ Feeling ကမြင့်နေသလို တင်သားဆိုင်နှစ်ခုကြားက ခရေ၀လဲ ရှုံ့ပွရှုံ့ပွဖြစ်ကရော။ ဘာကြောင့် ပြောနိုင်လဲဆိုတော့ ကျနော်က အိမ်သာတက်အလေးသွားနေခဲ့တာကိုး။ အဲ့ဒီနေ့ ညနေပိုင်းလောက်တစ်ခါ လက်ကစားဖို့ကြိုးစား ကြည့်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ နောက်တနေ့ရောက်တော့ ကျောင်း ကန်တင်းက သန့်စင်ခန်းမှာတစ်ခါ လုပ်ဖြစ်တယ်။ လူသူလေးပါးကို အာရုံစိုက်စရာမလိုတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့် အိမ်သာကို အလေးစွန့်ဖို့သွားတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ မကြာခဏ ဆိုသလို သွားမိပြီး ပျော်စရာလက်ကစားမိတယ်ပေါ့ ခင်ဗျာ”
"ကျနော် အသက်နည်းနည်းကြီးမှ စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောရမယ်။ အသက် ၁၄နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့။ ကျနော်က ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေနဲ့ အတူနေခဲ့ပေမဲ့ သူတို့က အလုပ်ကိစ္စကလွဲလို့ ဘာမှပြောဆိုသင်ပြတာမရှိကြဘူးဗျ။ ဘယ်သူမှ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြတာမရှိသလောက်ပဲ။ နေခဲ့တဲ့မြို့ကလေးကလည်း ခပ်သေးသေး၊ သူငယ်ချင်းအ၀န်းအ၀ိုင်းကလည်း နည်းတယ်၊ စကားဆက်စပ် မိလို့ လိင်ကိစ္စအကြောင်း တွေးတောစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ဆိုတာကလည်း မဖြစ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ အခြား ယောက်ျားကလေးတွေလို မိန်းကလေးတွေ အကြောင်း မတွေးမိ စိတ်ကူးမယဉ်မိခဲ့တာတော့သေချာတယ်။
မနက်ခင်းစောစော အိပ်ရာနိုးတော့ ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြီး ညအိပ်ဝတ်စုံကိုချွတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ကျနော့်ငပဲဟာ မမာ့တမာဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ ငါးလက်မလောက်ရှေ့တည့်တည့်ကို ငေါထွက်နေရောအဲ့အချိန်မှာလေ။ ကျနော့်အရွယ်အခြားယောက်ျားလေးတွေက ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိပြုမိကောင်းသတိပြုပြီးသားဖြစ်ချင်ဖြစ်ပေမယ့် ကျနော် အဲ့အချိန်က တော်တော်အရှက်သည်းမိ ခဲ့တယ်ဗျ။ ဒါ့အပြင် အိပ်ရာရဲ့ဘေးမှာ ကျောင်းသွားဖို့အတွက် ကျောင်းဝတ်စုံလဲဖို့အနေအထားဖြစ်နေတာကြောင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီ ၀တ်ဖို့အောက်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်တာမှာ ငပဲထိပ်က ခပ်စေးစေးဖြစ်နေတာကို ကျနော်သတိပြုမိပါတယ်။ ထိပ်အရေပြားလေးကိုကိုင်ပြီး ဟိုသည်ရွှေ့ လှန်ပြုကြည့်မိတော့ စေးကပ်နေတဲ့အထိအတွေ့နဲ့အတူ နည်းနည်းညစ်ပတ်နေသလားလို့။ အိပ်ရာမ၀င်ခင်က ကျနော် ရေကောင်းကောင်းချိုးခဲ့တာသေချာပါတယ်။ အခုကျနော် ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ် လေ့လာဆန်းစစ်တဲ့သဘောပါ အဲ့တာနဲ့ ဆော့ကစားချင်တဲ့ သဘောမပါပါဘူး။
ကျနော် ငပဲကို အထက်အောက် ဘယ်ညာ အသာအယာလှုပ်ရမ်းကစားမိသေးတယ် ဘယ်လောက်ထပ်ရှည်လာမလဲသိချင်လို့ပါ။ ဒီထက်ပိုပြီး ထိကိုင်ကစားကြည့်ဖို့ ကျနော့်စိတ်ထဲငံ့လင့်မိပေမယ့် အ၀တ်ဝတ်ဖို့အချိန်ကြပြီလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အခန်းတစ်ဘက် ခြမ်းကို ဖြတ်လျှောက်လိုက်တော့ ကျနော့်ငပဲဟာ ပေါင်သားတွေနဲ့ ဟိုသည်တိုးခတ်ရင်း ထူးထူးဆန်းဆန်း သာယာလာသလို ခံစားရပါ တယ်။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ မာတောင့်ပြီး မတ်လာသယောင် မြင်ရတာကြောင့် အ၀တ်ဘီရိုနားက ကုလားထိုင်မှာထိုင်ချလိုက်ရင်း ကျနော့် ပေါင်တံနှစ်ဖက်ကြားက ငပဲကိုအသာဖျစ်ညှစ်လိုက်တယ်။ အာ…လက်ထဲမှာကိုင်ထားရင်း နွေးပြီးပွလာသလိုပဲဗျ။
ကျနော် ငပဲကို အသာထိတွေ့မိပြီး ထူးဆန်းမှုကိုခံစားရသည့်နောက် လက်ငါးချောင်းနဲ့ဟိုသည်ပွတ်သပ် ထက်အောက်ရွေ့လျား စကစား ဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်သွက်သွက်ကလေး လက်ကစားခြင်းရဲ့နောက်ကွယ် စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာပြီး ဖြူပျစ်ပျစ်အရည်များဟာ ကျနော့်ငပဲ ထိပ်ဝမှ တစ်ဆင့် အသားကုန်ပန်းထွက်ကြရော။ ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲက နှလုံးခုန်သံဟာ မြန်ဆန်နေသလို ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲ သိချင်စိတ်ဝင်ရပါတယ်။ ငပဲထဲကထွက်ကာ ပေကျံနေတာမှန်သမျှကို တစ်သျှူးဖြင့် သန့်စင်ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး အ၀တ်အစားတွေကို ခပ်သွက်သွက်ဝတ်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ။
နောက်တစ်နေ့ရောက်ပြန်တော့ မနေ့ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေးမိချိန် ကျနော့်ငပဲ တဖြည်းဖြည်းမာပြီးမတ်လာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ပြီးတော့ ငပဲတလျှောက် ပူနွေးလာသလို စိတ်ထဲမှာလည်း လိပ်ပြာလေးတွေ တောင်ပံတဖျတ်ဖျတ် ခတ်နေသည့် ခံစားမှုမျိုး ခံစားလာရပါတယ် ခပ်စောစောအချိန်က အတွေ့အကြုံမျိုးလိုပေါ့။ ညပိုင်း မအိပ်ခင် ရေချိုးတဲ့အချိန်ရောက်တော့လည်း အလားတူပဲ မမာ့တမာ ငပဲက မတ်နေသလို ရင်ခုန်သံကလည်း မနေ့ကလိုပဲ ခံစားရပါတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်ရောက်ဖို့ အချိန်ကုန်ဆုံး မှာကို ကျနော်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။
မိသားစုဝင်တွေကို “Goodnight” ပြောပြီးနောက်မှာ အခန်းတံခါးကိုမြန်မြန်ပိတ် လင်းနေတဲ့မီးတွေအကုန်မှိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အိပ်ရာ ပေါ်ကို လှဲလျောင်းလိုက်ချိန် ပေါင်ကြားက ငပဲက မတ်မတ်ထောင်ပြီးသား အဆင်သင့်ဖြစ်နေရော။ အိပ်ရာပေါ်ကိုလှိမ့်ပြီးမှောက်လိုက် တော့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မွေ့ယာကြားမှာ ခိုးလုခုလု နှောင့်ယှက်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ပက်လက်ပြန်အိပ်လိုက်ပြီး အိပ်ရာခင်းတွေ စောင်တွေကို ခုတင်ဘေးကြမ်းပြင်ပေါ် တွန်းချရင်း ၀တ်ထားတဲ့ ညအိပ်ဘောင်းဘီကို အောက်ကိုလျောချွတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့။ ငပဲကို ကျနော်ကိုင်ကြည့် တော့ ထိပ်ပိုင်းလေးက အရည်ကြည်အနည်းငယ်စို့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော် စိတ်ထဲဟိုသည်တွေး စိတ်ကူးယဉ် လက်ကလည်း ကစားလိုက်တာ ခေါင်းအုံးပေါ်ရောက်တဲ့အထိ သုက်ရည်တွေကော့ပန်းမိပါရော အများအပြားပါပဲ။ အိပ်ရာပေါ်ခဏလေးငြိမ်သက်နေပြီး နောက် ခုန်ထလိုက်ရင်း ရှုပ်ပွသွားတာတွေကို အမြန်ရှင်းလင်းကာ အိပ်ရာမ၀င်ခင်ကပုံစံအတိုင်းပြန်လည် ခင်းကျင်းလိုက်ပါတယ်။ အိပ်ရာထဲပြန်လှဲမိ ပြန်တော့ လက်ကိုပေါင်ကြားထဲ ပြန်ထည့်မိတာပါပဲ။
အဲ့သည့်ညနောက်ပိုင်း မနက်ခင်းတစ်ကြိမ် ညနေပိုင်းနှစ်ကြိမ် ကျနော်လုပ်နိုင်သလောက် လူလစ်ချိန်မှန်သမျှ လိင်အာသာဖြေတော့တာ ပါ။ များသောအားဖြင့် ကျနော့်အိပ်ခန်းလေးထဲမှာပေါ့နော်။ အဲ့သလို လက်ကစားတာကို ဘယ်လိုမှမရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ရပ်လည်း မရပ်တန့်ချင်ခဲ့ဘူးလေ။
"အိမ်နီးချင်း ယောက်ျားလေးတွေထဲက တစ်ယောက်က တစ်ယောက်သောသူရဲ့နောက်ဖေးမှာ ကျနော့်ကိုလုပ်ပြခဲ့တာဗျ။ ကျနော်က ဒုတိယတန်း၊ သူတို့က စတုတ္ထတန်းအရွယ်ပေါ့။”
"အထက်တန်း အဲ…၉တန်းတက်တဲ့အချိန်လောက်က အတန်းဖော်အချို့ မြို့ထဲက ဂိမ်းဆိုင်မှာကစားနေကြရင်း ခင်ဗျားပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကို သိလားလို့ ကျုပ်ကိုမေးခဲ့ကြတာမှတ်မိတယ်။ ကျုပ်အဲ့အရွယ်ထိ ဘာပြောနေမှန်းမသိခဲ့ဘူးဗျ။ သူတို့က ဘယ်လိုလုပ် တာကိုခေါ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့သလို locker room ထဲမှာ သူတို့ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုရင်း တစ်ချက် နှစ်ချက်လောက် သရုပ်ပြခဲ့ကြ တယ်လေ။ သူတို့ရဲ့ငပဲအရွယ်အစားတွေနဲ့အတူ ဆီးစပ်က အမွှေးအနည်းငယ်ကို သူတို့အချင်းချင်းစနောက်လုပ်ပြနေချိန် မြင်လိုက်ရတာ ကျုပ်မျက်စိတွေပြူးကုန်တဲ့အထိ အံ့သြမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကိုကြည့်ရတာ မရှက်တဲ့အပြင် သူများကိုပြရတာ ကြိုက် တယ်လို့ ကျုပ်တော့ ထင်တာပဲ။"
"ကျနော် အကိုအကြီးဆုံးက တစ်ခုခုပြောဆိုမရချိန်ဆို ကျနော့်ငပဲကို ခေါင်းဖြီးဘရပ်ရ်ှနဲ့ လှမ်းရိုက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ အိမ်မှာဆိုသူက အမေ့ မှန်တင်ခုံကနေ ယူကိုင်နေတာအမြဲပဲလေ။ တစ်ခါက ဟိုသည် စနောက် စကားများကြတော့ သူက ကျနော့်ငပဲကိုဆွဲကိုင်ထားတာ မလွှတ်တော့ဘူး အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ။ အဲ့နောက်ပိုင်း ကျနော့်စိတ်တွေက တစ်မျိုးတမည်ဖြစ်လာရင်း စူးစမ်း လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့”
"ကျနော်နဲ့ ကျနော့်အကိုက အသက်အရွယ်မတိမ်းမယိမ်းဆိုတော့ ရေလည်းအတူချိုးကြတယ်။ ရေချိုးကြွေဇလုံထဲမှာလည်း တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက်စနောက်ရင်းကစားတတ်ကြတာပါ။ နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာချိန် ရေချိုးရင်း ဟိုသည်ဖက်ပြုနပမ်းလုံးရင်း စနောက် နေကြချိန် ငပဲတွေကလည်း မတ်လို့ပေါ့။ အဲ့တာကို အဖေမိသွားပြီး အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ မလုပ်သင့်တာတွေပြောဆိုဆုံးမကာ ရေအတူမချိုးကြဖို့ တားမြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ရေအတူမချိုးဖြစ်ကြတော့ပေမဲ့ အခြားယောက်ျားလေးတွေနဲ့အတူစုပြီး လိင်အာသာဖြေတာကို လက်တည့်စမ်းဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။”
"အိပ်ရာခင်းပေါ်မှာ အ၀တ်မပါဘဲလှဲလျောင်းခဲ့မိတဲ့နေ့ကို ကျနော်သတိရတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို လက်နဲ့ဟိုသည်စမ်း ပေါင်ကြားထဲလက်လျှို မိတော့ ရွှေဥမှာ အမွှေးအနည်းငယ်စမ်းမိတယ်။ လက်ကလေးနဲ့ပွတ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်နေရင်းမှ နှိုးဆွလာသလို ခံစားလာရတာပေါ့။ ငပဲကို လက်နဲ့ အသာဆုပ်ကိုင်လိုက် ပွတ်သပ်လိုက်လုပ်တော့ တဖြည်းဖြည်း မာသထက်မာလာပါတော့တယ်။ ကျနော့်ငပဲခေါင်းမှာလည်း အစတုန်းကတော့ ဘာမှမရှိဘူး ခဏနေတော့ အရည်ကြည်လေးတွေစို့ထွက်လာပြီး ချောကျိကျိဖြစ်နေရော။ မာပြီးမတ်လာတဲ့ငပဲက ဆီးစပ်နဲ့ခွာမရအောင်ကပ်လာတာကြောင့် လက်နဲ့အသာဆွဲကိုင်ပြီး ကစားတော့တာပဲ။ အရင်က ဒီလိုလုပ်ဖူးသလား ကျနော်မမှတ်မိ တော့ပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ စိတ်လိုလက်ရလုပ်ဖြစ်တော့တာပါ။ ကျနော့်ရွှေဥတွေ ကျစ်ကျစ်လာပြီး နည်းနည်းနာလာပေမဲ့ လက်ကစား တာကို မရပ်ဖြစ်ဘူး။ အချိန်မရှိတော့ဘူး အလျင်စလိုလုပ်နေရတဲ့အတိုင်း ခံစားရကား တင်ပါးတွေကို ပင့်ပင့်မြှောက်တဲ့ပြီး သုက်ရည်တွေ ကို ပန်းထုတ်တာပါပဲ။
ကျနော် အိပ်ရာပေါ်မှာ အတန်ကြာဆက်လှဲနေပြီး စိတ်ထဲနည်းနည်းငြိမ်သွားချိန်မှာတော့ ငပဲခေါင်းကိုလက်နဲ့အသာညှစ်ကာ သုက်ရည် တွေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ ထိပ်အရေပြားကတစ်ဆင့် တစ်စက်လောက်ကျမလားကြိုးစားကြည့်မိတယ်။ လုပ်ကြည့်ရင်း လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ လက်ကစားမိပြန်တာကြောင့် နောက်တစ်ကြိမ် သုက်ရည်အနည်းငယ်ထွက်တဲ့အထိ လိင်အာသာဖြေမိပြန်ရော။ စိတ်ထဲက ပထမအကြိမ် တုန်းကလို သက်သောင့်သက်သာမခံစားရပါဘူး။ နောက်ပိုင်း လိင်အာသာဖြေတဲ့အခါတိုင်း နှစ်ကြိမ်လောက်မှာ စိတ်ကြေနပ်သလို ခံစားရပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ပြီးလို့ ဒုတိယအကြိမ်ဆိုရင် ငပဲက ပိုမိုမာတောင့်ဖို့ကြာသလို အာသာပြေဖို့လည်း အချိန်ဆွဲလို့ရတယ် လေ။”
Alex Aung (9 July 2016)
Posted by Alex Aung at 11:15 AM No comments: